♫♥✿*ကျွန်မ ရဲ့ နားခိုရာ ♫♥✿*: မေတ္တာသည်သာလျှင်(ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အမျိုးသမီးများအတွက်)
ကံတရား၏ ရက်ရက်စက်စက် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အယူခံဝင်ခွင့်မရဘဲ ခါးကော့အောင် သူမ ခံလိုက်ရသည်။
ဆယ်သက်စားမကုန်သော ပစ္စည်းဥစ္စာများ ယခုတော့...
ပါးပြင်ပေါ်ကျလာသည့် မျက်ရည်စက်များကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ကြမ်းတမ်းစွာသုတ်ပစ်လိုက်သည်။
မျက်ရည်ကျတယ်ဆိုတာ အရှုံးပေးတာပဲ..စိတ်ဓါတ်ပျော့ညံ့သူတွေ အားငယ်တတ်သူတွေရဲ့ လက်နက်ပဲ၊
မျက်ရည်ဘာလို့ ကျရမှာလဲ..ဘ၀ကိုဘာလို့ အရှုံးပေးရမှာလဲ။
ဖန်တီးလာစမ်းပါစေ။ဒီကံဆိုးခြင်းတွေ၊ ခါးမကော့ဘဲ ခေါင်းမော့ပြီးရင်ဆိုင်ရဲအောင်ကြိုးစားမည်။.လောကဓံကိုသူမရင်ဆိုင်လိုက်မည်။
ရင်ဆိုင်နိုင်အောင်လဲ သူမ သတ္တိမွေးရမည်။ လောကမှာ လူဖြစ်လာလျှင် ကြုံတွေ့ ရမည့်အခက်အခဲတွေကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရမှာ လူ့ တာဝန်တစ်ရပ်မဟုတ်လား.။
မိမိဘာသာအားပေး၊မိမိဘာသာအားတွေမွေးပြီး စတုဒီသာအလှူမဏ္ဍပ် ဆီသို့ ခြေလှမ်းကိုဦးတည်လိုက်သည်။
လောလောဆယ်တော့ ဘယ်သွားလို့ ဘယ်လာရမှန်းမသိသေးတာမို့သမုဒ္ဒရာ ၀မ်းတစ်ထွာအတွက်
မရှက်သုံးပါးမှာ တစ်ပါး ပါလိုက်ရပေဦးမည်။ငတ်တော့လည်းမရှက်နိုင်ပြီလေ။
ခြေလှမ်းများက အလှူမဏ္ဍပ်နဲ့ နီးလာတာမို့ တစ်စတစ်စ ကျယ်လာသည့် ဆူညံသံများကိုကြားနေရတာ တော်တော်စိတ်ပျက်စရာကောင်းလှသည်။ ထမင်းထုပ်တောင်းသူတွေ ကသူ့ ထက်ငါ အလုအယက် တိုးဝှေ့ နေတာမို့ 
ရန်ဖြစ်သံတွေ၊ ၀င်ပေါက်နဲ့ ထွက်ပေါက် တစ်ပေါက်ထဲမို့ တိုးဝှေ့ ထွက်လာရင်းထမင်းထုပ်လွတ်ကျ၊ထိုင်ချ၊ပြန်ကောက်
နောက်ကတက်လာတဲ့သူတွေက တက်နင်း.လဲသူကလဲ ၊နာသူကနာ၊ကွဲသူကကွဲ၊ဆဲတဲ့သူကဆဲ
စိတ်ပျက်စရာကောင်းလှသည့် ထိုနေရာကို သူမရောက်ခဲ့တာ ဒါနဲ့ ပါဆို သုံးရက်မြောက်ရြှိပီ။စိတ်ပျက်လွန်းလှတာမို့ သူမရှေ့ မတိုးသေးဘဲ ရပ်မြဲရပ်နေ၏။
၀မ်းထဲကလဲ အစာလိုနေကြောင်း တကြုတ်ကြုတ်နဲ့ အသံပေး၍ အချက်ပြနေပြီ။
မဏ္ဍပ်ဆီသို့ မျှော်ကြည့်ရင်းသူမမျက်နှာလန်းကနဲဖြစ်သွားသည်၊ယခင်ရက်များက သူများနှင့်မတူ သူမအားကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ
အလှူရှင်လား..အလှူကြီးကြပ်သူလားတော့မဆိုနိုင်။သူမအားမျက်မှန်းတန်းမိဟန်ရှိတာမို့ ကရုဏာမျက်လုံးများနဲ့ အပြုံးမျက်နှာကြောင့် ၀မ်းသာအားတက်ကာ ထိုသူထံသို့ သုတ်သုတ်ကလေးလျှောက်သွားလိုက်သည်။
“ဒီနေ့ ဘယ်နှစ်ယောက်စာ ယူမှာလဲ”
သူမအဖြေကြောင့် ထိုသူရဲ့ ပြုံးနေတဲ့မျက်နှာဟာ ချက်ခြင်းပဲ ငြူစူအလိုမကျသည့်
“ဘယ်လိုလဲကွဲ့သုံးရက်အစာလာတောင်းတာ သုံးမျိုးပါလား၊ကိုယ့်ဝမ်းပမာဏတောင်မသိပါလား၊
သူများရဲ့ ကုသိုလ်အလှူမှာ မင်းက အကုသိုလ်လာယူတာလားကွဲ့ ”
ရင်ဝလှံစူးသလို သူမဘ၀မှာ မထင်မှတ်ပဲ စွပ်စွဲကြိမ်းမောင်းခံရတော့ ရှက်လဲရှက်၊၀မ်းလည်းနည်းကာ
“ဟဲ့..ဟဲ့..သူများမင်္ဂလာယူနေတဲ့အလှူမှာ မင်းက ဘာလို့ ငိုရတာလဲ ၊မင်းအလှူခံတာ မူမမှန်တော့ ကျုပ်ပြောရတာပေါ့”
သူမ ငိုကြွေးခြင်းကို အတင်းရပ်ပစ်လိုက်သည်။ပြီးတော့
“အ၇ှင်တို့ အလှူကို ကျွန်မ လိမ်ညာပြီးမတောင်းခဲ့ပါဘူးရှင်၊ကျွန်မရဲ့ ဘ၀ကံအကျိုးပေးကိုက
ဆိုးလွန်းလို့ ပါရှင်..ကျွန်မတို့ မြို့ မှာ ယင်နာ ကျလို့ ကျွန်မတို့ သားအဖ သုံးဦး ကိုယ်လွတ်ရုန်းခဲ့တာပါ။ “ကောသမ္ဗီ” ရောက်တော့ မြို့ ပြင်ဇရပ်မှာ ခိုနားပြီး ပထမနေ့ မှာ စားဖို့ သောက်ဖို့ ထမင်းထုပ် သုံးထုတ် လာတောင်းခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီညမှာ အသက်ကလဲကြီး ခရီးကလဲပန်းတော့ အဖေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ နောက်တစ်နေ့ မှာ အမေနဲ့ ကျွန်မအတွက် နှစ်ယောက်စာ ထမင်းထုပ် နှစ်ထုပ်လာတောင်းပြီး..ညက.....ညက..”
“ညက ဘာဖြစ်လို့ လဲ..ကလေးမ”
ထိုသူထံမှ ဂရုဏာသံကိုပြန်ကြားရတော့ ..
“ညက အမေဆုံးပြန်ပါတယ်၊ဒါ့ကြောင့်ဒီနေ့ ကျွန်မတစ်ယောက်ထဲကျန်တော့တာမို့ တစ်ယောက်စာပဲလာတောင်းတာပါရှင်”
“ဒါဖြင့် မင်းဒီမြို့ ကမဟုတ်ဘူးပေါ့...မင်းဘယ်ကလဲ ဘယ်သူ့ သမီးလဲ”
ကျွန်မ ဘဒ္ဒ၀တီသူဌေးကြီး ရဲ့ သမီးပါရှင့်”
“မင်းက ဘဒ္ဒ၀တီသူဌေးကြီး ရဲ့ သမီး..ဟုတ်လား..”
ထိုသူမှာ မယုံကြည်နိုင်စွာ ထပ်မေးလာသည်။ အံ့မခန်းလောက်အောင်ပင်ကြွယ်ဝချမ်းသာသော
သူဌေးတစ်ဦးရဲ့ သမီးက စတုဒီသာ အလှူမဏ္ဍပ်မှာ အစာလာတောင်းတဲ့အဖြစ်ကမယုံကြည်စရာပဲလေ၊
သို့ ပေမယ် သူမရဲ့ အပြောအဆိုနဲ့ ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့ မှုက လိမ်ပြောဖွယ်ရာမရှိ၊
ယင်နာ...တစ်ကယ်ကြောက်စရာကောင်းသည့်ကပ်ဆိုး။ထိုရောဂါကျရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ ယင်ကောင်ကစ ကြက်-၀က်-ကြောင်-ကျွဲ-နွား-လူ အစဉ်အတိုင်း ငယ်သောသတ္တ၀ါမှ ကြီးသောသတ္တ၀ါ
တို့ အိမ်မှာ၇ှိသမျှ လျှင်မြန်စွာသေတတ်၏။အိမ်နံရံကိုဖောက်ပြီးကိုယ်လွတ်ထွက်ပြေးနိုင်မှ အသက်ချမ်းသာခွင့်ရသည် ဟူ၍ လူကြီးများပြောသံကြားဖူးသည်။
ဘဒ္ဒ၀တီသူဌေးကြီး မိသားစုဘ၀ပျက်ပါပေါ့လား။ယခုတော့သူဌေးကြီးမိသားစုလည်းသေ၇ှာပြီ။သူ့ ရှေ့ မှောက်ရောက်နေသည့် မိန်းကလေးကပိုသနားစရာကောင်းနေသည်။
မစူးစမ်းမဆင်ခြင်ပဲ အထင်အမြင်လွဲမှားကာ ရင့်ရင့်သီးသီးပြောမိပြီးမှ သူမလေးအပေါ်သနားသွားရသည်။
ပစ္စည်းဥစ္စာလည်းဆုံးပါး၊ မိဘလည်းကွယ်လွန် လောကအလယ်မှာ မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ ခိုကိုးရာမဲ့နေတဲ့သူမကို လူသားတစ်ဦးဆန်စွာ စေတနာသန့် သန့် နဲ့ ကူညီစောင့်ရှောက်တာဝန်ယူလိုက်တော့မည်။သားသမီးမရှိသောသူ့ အတွက် ချစ်ခင်တွယ်တာစရာသမီးလေးတစ်ယောက်လဲတိုးလာတာပေါ့၊
“ကဲ..ဘာမှဝမ်းနည်းအားမငယ်တော့နဲ့ နော်။မိတ္တသူကြွယ် ဆိုတာကျုပ်ပဲ။မင်းကိုသမီးအရင်းအဖြစ်မွေးစားမယ်ဟုတ်လား။ဒီနေ့ ကစပြီး ကျုပ်ကို မင်းရဲ့ အဖေအရင်းလို့ သာမှတ်ပေတော့၊”
“ကျေးဇူးကြီးမာလှပါတယ် အဖေရယ် အဖေသာမကယ်ရင် ကျွန်မဘ၀ ဘယ်ကနေဘယ်လို စခန်းသွားရမလဲဆိုတာမတွေးတတ်ဘူး အဖေ့ကျေးဇူးကို ကျွန်မတစ်သက်မမေ့ပါဘူး၇ှင်”
သူမသည်မြေကြီး၌ ကျုံ့ ကျုံ့ လေးထိုင်ကာ ဦးသုံးကြိမ်ချမိသည်။မွေးစားဖခင်ရဲ့ ခြေဖမိုးကိုနဖူးဖြင့်ဦးတိုက်ပြီးအလေးအမြတ်ပြုလိုက်ပါသည်။
အလှူမဏ္ဍပ်မှ အဖေပြန်လာနေကျအချိန်ကို မှန်းပြီးတံခါးဝမှာထွက်ကြိုနေမိသည်၊ယနေ့ တော့အဖေ့နဲ့ အတူသားသားနားနား
အဖော်တစ်ယောက်ပါလာသည်။ခံ့ညားသောဝတ်စားဆင်ယင်မှု၊ ရိုကျိုးသောထိုသူ၏အမူအရာကြောင့် အဖေ့ထက်ချမ်းသာကြွယ်ဝပြီး အဆင့်မြင့်သောလူတန်းစားပင်ဖြစ်လိမ့်မည်။
တစ်ချိန်တုန်းက မိမိကိုယ်တိုင် အဆင့်မြင့်ချမ်းသာခဲ့ဖူးသူမို့ ဧည့်သည်ကိုဘယ်လိုဧည့်ဝတ်ပြုရမလဲဆိုတာနားလည်ပါသည်။
အလိုက်သိစွာ နေရာထိုင်ခင်းပြင်ပေးပြီးစားသောက်ဖွယ်တို့ ဖြင့်တည်ခင်းဧည့်ခံဖို့ အိမ်ထဲသို့ ဝင်ရန်ခြေလှမ်းပြင်ဆဲ..
အဖေ့ခေါ်သံကြောင့်လှည့်လာပြီးအဖေ့အနီးမှာ ခပ်ယို့ ယို့ လေးထိုင်ချလိုက်သည်။
အဖေ၏လှမ်းအပြောတွင် “သြော်..ဟုတ်လား” ဟုဧည့်သည်က ခေါင်းညိတ်သည်။
“အလှူမဏ္ဍပ်မှာ ဆူဆူညံညံ ရှိခဲ့တာကိုအိမ်ကနားထောင်ပြီးကျုပ်က အလှူကိုကျေနပ်နေခဲ့တာ ဒီနေ့ တိတ်ဆိတ်လှချေလားလို့ 
မိတ္တသူကြွယ် ကိုမေးတော့မှ အကြောင်းစုံသိရတော့တယ်။မဏ္ဍပ်မှာ ၀င်ပေါက်နဲ့ ထွက်ပေါက်ကို သီးခြားနဲ့ စနစ်တကျဖောက်ထားလို့ အရင်လို တိုးဝှေ့ ဆူညံသံတွေကင်းသွားတော့ လူတွေလဲစည်းကမ်းတကျနေတတ်သွားတယ်။
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လှူဒါန်းနေတာတွေ့ တော့ အလှူကိုလဲပိုပြီးဝမ်းသာကြည်နူးရတယ်။သမီးရဲ့ အစီအစဉ်တွေဆိုတာဟုတ်လား။”
“အဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီး မိတ္တသူကြွယ်မှာ သမီးအလိမ္မာတစ်ယောက်ရထားတာသိရတာပဲ”
ဧည့်သည်၏ကြည်လင်အေးမြသောအသံ၊ ချိုပြုံးသောမျက်နှာ ကြောင့်သဘောမနေကောင်းသူဖြစ်မည်ဟုတွေးမိပါသည်၊။
“သမီးက ဘဒ္ဒ၀တီသူဌေးကြီးရဲ့ သမီးလား...”
သူမအားပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နဲ့ ပြောနေတာက တစ်ကယ်ရင်းနှီးတဲ့ပုံစံပါဘဲ။ ကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီးမကြာခဏတဖွဖွ ပြောနေတဲ့မိတ်ဆွေ“ဃောသက”သူဌေးများလားဟုပင်အတွေးဝင်လာသည်။
“ကျုပ်က သမီးရဲ့ အဖေနဲ့ အရမ်းရင်းနှီးတဲ့ မိတ်ဆွေအရင်းအချာတွေကွယ့်၊ယခုတော့မိတ်ဆွေကြီးရဲ့ သတင်းကြားရတာစိတ်မကောင်းစရာပါလား၊ကောသမ္ဗီကိုခြေဦးလှည့်လာကတည်းက ကျုပ်ဆီလာတယ်ဆိုတာ ထင်၇ှားနေတာပဲ။”
“ဟုတ်ပါတယ်ရှင်..“ကောသမ္ဗီ”မှာ ဖေဖေနဲ့ အရမ်းခင်တဲ့ “ဃောသက” မိတ်ဆွေဆိုတာရှိကြောင်း၊ မကြာမကြာပြောဖူးပါတယ်၊ဆွေမျိုးထက်မကလည်းယုံကြည်အားကိုး၇ှာပါတယ်၊ယင်နာကျလို့ ဒုက္ခရောက်ချိန်မှာတောင် ဆွေမျိုးတွေဆီမသွားပဲ ဃောသက သူဌေးဆီအရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမယ့် အဖေနဲ့ အမေ မှာ သူဌေးကြီးကိုမတွေ့ ၇ဘဲဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။”
သူမမှာ ကံဆိုးလွန်းလှတဲ့မိဘနှစ်ပါးကို သတိရမိတော့ ၀မ်းနည်းစွာ ငိုကြွေးမိပြန်ပါသည်။
”ဖြစ်၇လေကွယ် ကျုပ်မသိလိုက်ရလို့ ပါ၊စောစောကတည်းကသာသိရင် ဒီလိုအဖြစ်မျိုးမရောက်ပါဘူး။
ကဲ..မငိုနဲ့ တော့နော် ၊ကျုပ်မိတ်ဆွေရဲ့ သမီးဟာ ကျုပ်သမီးပဲပေါ့။ကျုပ်မိတ်ဆွေရဲ့ သမီးကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ ကျုပ်မှာတာဝန်ရှိတယ်၊ဘယ်လိုလဲ“ကိုမိတ္တ”ကျုပ်မိတ်ဆွေရဲ့ သမီးမို့့ဒီကလေးမကိုကျုပ်မွေးပိုင်ခွင့်၇ှိတယ်နော်။
သူမထံဖျတ်ခနဲ အကြည့်ရောက်လာတော့ အဖေ့ရဲ့ မျက်နှာသည်မကောင်းလှ၊မွေးစားထားသည်မှာရက်ပိုင်းမျှသာရှိသေးသော်လည်းသူမအပေါ်သံယောဇဉ်ဖြစ်နေရှာမှာပဲ။
“ဃောသက” သူဌေးကြီးကိုကျတော့လည်း အထက်အကြီးအကဲမို့ ခွန်းတုံ့ ပြန်ဝံ့မှာမဟုတ်မှန်းသိသည်။
သူမအနေနှင့် မွေးစားအဖေ မိတ္တသူကြွယ် ကိုေ၇ှးဦးစွာကျေးဇူး၇ှင်အဖြစ် ချစ်ခင်ပါ၏တစ်ဖက်က ဃောသကသူဌေးကြီးမှာလည်းဖခင်ကြီးကိုယ်တော်တိုင်အားကိုးတကြီး၇ှိခဲ့သည့်မိတ်ဆွေအရင်း
ဃောသကသူဌေးကြီးဆီမှာ အပ်နှံထားရစ်ဖို့ သေချာသည်။သို့ ပေမယ့်ရက်ပိုင်းမျှသာ အဖေတော်ထားသည့် မိတ္တသူကြွယ်အပေါ်လည်းသူမကိုယ်တိုင်သံယောဇဉ် ရှိပါသည်။
၀မ်းသာပါတယ်ဆိုတဲ့အဖေ့အသံမှာ တိုးတိမ်အက်၇ှသွားသလို၇ှိ၏။သူမအပေါ်ကြင်ကြင်နာနာနဲ့ ပြုစုခဲ့တဲ့ အဖေ့ကိုခွဲပြီး“ဃောသက” သူဌေးကြီးနောက် မလိုက်နိုင်အောင် ၇ှိလေသည်။
“လိုက်သွားလိုက်သမီးလေး...သူဌေးမင်း နဲ့ သမီးရဲ့ အဖေအရင်းဟာ မိတ်ဆွေတွေမို့ သမီးကိုသူဌေးမင်းမွေးစားသင့်တာအမှန်ပါဘဲ
ပြီးတော့အဖ့ဆီမှာနေရတာထက်သမီးပိုချမ်းသာလိမ့်မယ်။သမီးချမ်းသာရင် အဖေ၀မ်းသာကျေနပ်ရမှာပေါ့။သူဌေးမင်းဆီမှာနေပေမယ့်အဖေနဲ့ အမြဲတွေ့ နိုင်တာပဲ။အဖေလဲအမြဲလာလည်ပါ့မယ်”
သူမအားကလေးငယ်တစ်ဦးလိုချော့မော့နေပေမယ့် အဖေ့မျက်ဝန်းမှာ မျက်ရည်တွေနဲ့ ပါလား..။
သူမအဖို့ တော့“ ဃောသက” သူဌေးကြီးကိုအဖေအရင်းလိုချစ်နိုင်ပါသည်။မိတ္တသူကြွယ်ကိုလည်းမခွဲနိုင်။
ဒီလိုနဲ့ သူမဟာ “ဃောသက” သူဌေးကြီး ရဲ့ မွေးစားသမီးအဖြစ် ကြီးကျယ်ခန်းနားတဲ့ အဆောင်အယောင်တွေနဲ့ နေခွင့်ရပြန်ပါတယ်။
သြော်...ကံတရားက မျက်နှာသာပေးတော့လည်း ချမ်းသာကြွယ်ဝသည့် သူဌေး နှစ်ဦးရဲ့ ရှုမငြီးတဲ့ သမီးအဖြစ်နဲ့ 
နေခွင့်ရပြန်ပြီပဲ...ဒီလိုနဲ့ ဃောသက သူဌေးကြီးအိမ်သူမထပ်ရောက်ခဲ့ပြန်ပါသည်။
.ဒီနေ့ တော့ ထူးထူးခြားခြားမဇ္ဈိမ၏ အကြီးကျယ်ဆုံး နက္ခတ်သဘင်ပွဲ ဆင်ယင်ကျင်းပမည့်နေ့ ဖြစ်သည်။
ဗြဟ္မဏဘာသာဝင် တို့ ၏ရှေးထုံးအစဉ်အလာအရ မကောင်းသောဘေး၊မကောင်းသောနက္ခတ်၊မကောင်းသောဒဏ်တို့ ပပျောက်စေဖို့ 
အိမ်တွင်းပုန်း ဇနီးမယားသားသမီးများပါမကျန် မြစ်ဆိပ်သို့ သွား၍ ဦးခေါင်းလျှော် ရေမိုးချိုးသန့် စင်ကြသည်။
ယင်းသို့ ဦးခေါင်းဆေးမင်္ဂလာပြုရန် ဂင်္ဂါမြစ် ကို အထွတ်အမြတ်ပြုထားကြလေသည်။
နက္ခတ်သဘင်ပွဲသည် အိမ်တွင်းပုန်းအမျိုးသမီးတို့ အပြင်ထွက်ခွင့်ရသောပွဲမို့ ကာလသားတို့ အကြိုက်ဖြစ်ကာအထူးစည်ကားလှလေသည်။ မနက်ဝေလီဝေလင်းကတည်းကတည်းက သွားလာနေကြသည်။
သူမသည် အိပ်ရာကနိုးနေသော်လည်း မထသေးဘဲ ထူးဆန်းသည့်ဘ၀ကံအကျိုးပေးကို အတွေးနယ်ချဲ့ နေမိသည်။
အံ့သြဖို့ လည်းကောင်းပါသည်။ခုနှစ်ရက် တစ်ပတ်လောက်တောအတွင်းမှာပင် ငိုတစ်ခါရယ်တစ်လှည့် အနိမ့်အမြင့်ပြောင်းလဲခဲ့ရသည့်ဘ၀အဖုံဖုံ.
.ပထမ...ဘဒ္ဒ၀တီ သူဌေးကြီးရဲ့ သမီး ...။
နောက်ပစ္စည်းဥစ္စာလည်းရှုံး မိဘနှစ်ပါးဆုံးတော့နေတော့ဇရပ်၊စားတော့ အလှူမဏ္ဍပ်ဖြစ်ခဲ့ရသည့် သူတောင်းစားသာသာဘ၀၊
ပြီးတော့ စိတ်ထားဖြူစင်လှသည့် “မိတ္တသူကြွယ်” ရဲ့ မွေးစားသမီး..ဟော အခုတော့ အဖေ့မိတ်ဆွေ “ဃောသက”သူဌေးကြီးရဲ့ 
တစ်ဦးတည်းသော သမီးအဖြစ် နဲ့ ပြည့်ပြည့်စုံစုံနေရပြန်ပါသည်။ ထပ်၍တစ်ဖန်ဘာများပြောင်းလဲလာဦးမလဲမသိ။
“သခင်မလေးဘ၀က အားကျဖို့ ကောင်းတယ်နော် တို့ သခင်ကြီးမှာ သားသမီးအရင်းမ၇ှိတော့ သခင်မလေးကိုပဲအချစ်တွေပုံပြီးဖူးဖူးမှုတ်ထားလိုက်တာ။မိတ္တသူကြွယ် ဆိုလည်းသခင်ကြီးကိုမတော်လှန်ရဲလို့ သာပေးလိုက်ရတာ
သူ့ သမီးကိုတစ်နေ့ လာမတွေ့ ရမနေနိုင်အောင် သံယောဇဉ်ကြီး၇ှာတာလေ”
“အင်းလေ တို့ သခင်မလေးက မွေးစားအဖေနှစ်ယောက်လုံး သဲသဲလှုပ်ချစ်လောက်အောင်လဲ အရမ်းလိမ္မာပြီးနူးညံ့သိမ်မွေ့ တာကိုး”
သူမအိပ်နေတုန်းထင်ပြီးနက္ခတ်သဘင်ပွဲသွားဖို့ သုဇာနဲ့ မုဒြာ ကြိုတင်ပြင်ဆင်လုပ်ကိုင်ပေးရင်းတီးတိုးပြောနေကြသည်ကိုအိပ်ရာထဲကနေကြားလိုက်ရပါသည်။
“တို့ သခင်မလေးက တစ်နေ့ ထက်တစ်နေ့ ပိုပိုလှလာလို့ ငါတော့အရမ်းစိုးရိမ်မိတယ် သုဇာရယ်”
“ဒီနေ့ မြစ်ဆိပ်ဆင်းရင် နန်းရင်ပြင်က ဖြတ်သွားရမှာလေ၊မဟာရာဇာ ကလည်းခပ်ငယ်ငယ်အ၇ွယ်ကောင်းကောင်း ၊မတော်တဆ
တို့ သခင်မလေးကိုမြင်ပြီးေ၇ွှသဘောတော်ကျသွားရင်တော့မလွယ်ကြောပဲ”
“ဘာလို့ မလွယ်ရမှာလဲ သခင်မလေးမိဖုရားဖြစ်မှာပေါ့၊ ငါတို့ တောင် သခင်မလေးနောက်က ထမီစဆွဲပြီးရွှေနန်းတော် ရောက်ရချေသေး ရဲ့ ..ဟိဟိ”
“အရူးမ သုဇာ နင်ဘာမှမသိပါဘူး ဘုရင်ဆိုတဲ့အမျိုးက မယားတွေများပါဘိ။တို့ သခင်မလေးစိတ်ဆင်းရဲမှာပေါ့ဟဲ့..”
“တော်စမ်းပါ မုဒြာရယ် နင်ကသာအစိုးရိမ်လွန်နေတာ ဟိုက တို့ သခင်မလေးကို ရွှေသဘောတော်ကျပါစေဦးတော့..”
“ဟင့်အင်း..ငါတော့ ဘုရင်ကြီးသဘောမကျပါစေနဲ့ လို့ ပဲဆုတောင်းတယ်၊ တို့ သခင်မလေးကိုစိတ်မဆင်းရဲစေချင်ပါဘူး.သဘောလဲမတူနိုင်ပေါင်”
“ဟဲ့..သုဇာ နဲ့ မုဒြာ ၊ကိုယ်နဲ့ မဆိုင်တဲ့စကားတွေ ဘာလို့ ပြောနေရတာလဲ ၊မင်းစကား စိုးစကား၊ဆိုတာမပြောကောင်းဘူး ၊မဟာရာဇာ နားကြားပြီးနင်တို့ လျှာတွေအဖြတ်ခံချင်လို့ လား”
အထိန်းတော်ကြီးဒေါ်ခုဇ္ဇုတ္တရာ ၏ အသံကြောင့် သုဇာနဲ့ မုဒြာ ငြိမ်သွားကြသည်၊ အားလုံးကတော့ ဒေါ်ခုဇ္ဇုတ္တရာ ကို ကြောက်ကြပါသည်။ခါးကုန်းအရုပ်ဆိုးသလောက် ပါးစပ်ပေါက်လဲနည်းနည်းကြမ်းသည်။
စိတ်ရင်းကတော့ ကောင်း၇ှာသား၊သူမကိုလဲသမီးလေးအရင်းလို ချစ်ခင်တွယ်တာပါသည်။ကျွန်အမှုလုပ်သူတို့ တွင် အသက်အကြီးဆုံးမို့ ငယ်သူတို့ ကရိုသေလေးစားကြသည်။
သူမ၏စိတ်ဆန္ဒအတိုင်းဆိုလျှင် ယနေ့ နက္ခတ်သဘင်ပွဲကို မသွားချင်ပါ။သို့ ပေမယ့်ဖေကြီးကိုယ်တိုင်က
တစ်အိမ်သားလုံးမြစ်ဆိပ်မဆင်းမနေရ ဟု အမိန့် တော်ထုတ်ထားတာကြောင့်သွားရပေဦးမည်။
သူမ မထချင်ထချင်နဲ့ အိပ်ရာပေါ်က ထလိုက်ပြီးအတွင်းခန်းထဲဝင်လိုက်တော့.
“ဟော...သခင်မလေးနိုးလာပြီ၊မျက်နှာသစ်ရေနဲ့ အမွှေးနံ့ သာတွေအဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီ နံက်စာ စားသုံးပြီးတာနဲ့ မြစ်ဆိပ်ဆင်းဖို့ သခင်ကြီးထပ်ဆင့်အမိန့် ထုတ်ထားပါတယ်၊သခင်မလေးနိုးလာမယ့်အချိန်ကိုသာ စောင့်နေကြတာပါ”
“သခင်ကြီးတို့ က ကျွန်မတို့ ပြန်လာမှ သူ့ အစီအစဉ်နဲ့ သူသွားမယ်တဲ့”
သူမ ဘာမှဆက်မေးမနေတော့။မြစ်ဆိပ်သွားရမှာပင် စိတ်က ခပ်လေးလေး။သွားချင်စိတ်မရှိပေမယ့် ဖေကြီးအမိန့် ကိုမလွန်ဆန်ဝံ့တာမို့ သွားရမှာပဲ။သူမကြောင့်ဖေကြီးကိုစိတ်မငြိုငြင်စေချင်ဘူးလေ။
မြစ်ဆိပ် မှ အိမ်ပြန်တော့မွန်းတိမ်းစသာ၇ှိသေးသည်။သူမပြန်လာမှ ဖေကြီးသွားရမှာမို့ 
ဟင်.....အခြေအနေအားလုံးက အပြောင်းလဲကြီးပြောင်းလဲနေပြီ။မြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းက ယုံနိုင်ဖွယ်မရှိ။သူမအံ့သြတကြီးနှင့်စကားတောင် ချက်ချင်းမပြောနိုင်ခဲ့။
ဖေကြီးနဲ့ အိမ်မှာကျန်ခဲ့တဲ့သူတွေအားလုံး လမ်းမပေါ်မှာ ငုတ်တုတ်လေးတွေထိုင်နေကြသည်။
အိမ်ကြီးကိုလည်းချိတ်ပိတ်ထားပြီး ဓားလှံ ကိုင်ထားတဲ့ စစ်သည်တော်တွေနဲ့ယောက်ယက်ခတ်နေသည်။
ထိတ်ထိတ်ပျာပျာ နှင့် သူမ ဖေကြီးဆီခပ်သုတ်သုတ်လေးလျှောက်သွားပြီး..
“ဖေကြီး..ဘာဖြစ်တာလဲဟင် .ရဲမက်တွေက ဘာလို့ အိမ်ကိုဝိုင်းထားရတာလဲ
ဖေကြီးတို့ ကရော ဘာလို့ လမ်းပေါ်မှာထိုင်နေကြတာလဲ..”
ငေးငေးငူငူထိုင်နေတဲ့ဖေကြီးလက်မောင်းကို ကိုင်လှုပ်ကာ သိချင်စိတ်တွေ မမျိုသိပ်နိုင်ဘဲ
ဖေကြီးမှာ သူမမေးခွန်းကို ချက်ချင်းမဖြေနိုင်။ရှက်စိတ်ဒေါသစိတ်တွေနဲ့ မျက်နှာမှာ
သပြေသီးမှည့်ရောင်သမ်းနေပြီ။ရှက်ရှာမှာပေါ့။ ကောသမ္ဗီ ရဲ့ နာမည်ကြီး သူဌေးကြီး “ဃောသက”
၇ဲ့ အိမ်တော် မင်းအာဏာနဲ့ ချိတ်ပိတ်ခံရတဲ့သတင်းက မကြာခင် ပျံ့ နှံ့ တော့မည်။လောလောဆယ်မှာ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့လမ်းပေါ်မှာ ငုတ်တုတ်ထိုင်နေရတဲ့အဖြစ်။
အလိုလိုဝမ်းနည်းလာပြီး သူမမေးခွန်းမှာ ငိုသံပါတော့မှ.
“သမီးလေးကို မဟာရာဇာက လိုချင်လို့ အခုချက်ချင်းပို့ ပေးရမယ်တဲ့..”
“သမီးလေးအလိုမတူပဲ ဖေကြီးဘာမှမလုပ်ချင်လို့ သမီးလေးစိတ်ဆင်းရဲမှာစိုးလို့ ဖေကြီးလဲ
မပို့ ပေးနိုင်ဘူးဆိုပြီးငြင်းလိုက်တာ အခုသမီးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲ ဖေကြီးကို သူဌေးရာထူးကနေချလိုက်တယ် ဖေကြီးရဲ့ စည်းစိမ်တွေလဲ မင်းဘဏ္ဍာအဖြစ်သိမ်းလိုက်တယ်”
သူမအံ့သြ ၀မ်းနည်းစိတ်နဲ့ ဖေကြီးကို ကြည့်မိသည်။သူမအပေါ်မှာ မင်းအာဏာစကားကို
ပယ်၇ှားဝံ့သည်အထိ ချစ်၇ှာတာပါလား။သူဌေးစည်းစိတ်အားလုံးကို မင်းဘဏ္ဍာအဖြစ် သိမ်းပိုက်ခံရခြင်းထက် သမီးကညာပို့ ဆက်ရမည့်အရေးက ပို၍ရင်နင့်ရင်နာဖြစ်၇ှာနေပြီထင်။
“ဖေကြီး.. သမီးကိုအခြွေအရံတွေနဲ့ လာခေါ်ဖို့ မဟာရာဇာကို အကြောင်းကြားလိုက်ပါတော့”
ဘုရင်မင်းမြတ်ထံသို့ သူမစိတ်ဆင်းရဲမှာစိုးလို့ စည်းစိမ်နဲ့ လဲပြီးအနစ်နာခံရဲတဲ့ဖေကြီးရဲ့ 
မေတ္တာကို သူမနားလည်ရမည်လေ.ဖေကြီးရဲ့ မေတ္တာ ဂရုဏာ နဲ့ သူမအပေါ်ငဲ့ညှာမှုကို သူမသိပါသည်.သူမအနေဖြင့်လည်း ဖေကြီးရဲ့ စည်းစိမ်နဲ့ သူဌေးဆိုတဲ့ဂုဏ်သိက္ခာ ကို ကာကွယ်ပေးရမည်လေ။
လူဆိုသည်မှာ မိမိအကျိုးစီးပွားတစ်ခုတည်းကိုသာ ရှေးရှု၍ မရနိုင်ပါ။မိမိအတွက်သာမက မိမိပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ပါ ထည့်စဉ်းစာရပါလိမ့်မည်။ အသိညဏ်နဲ့ ယှဉ်တဲ့လူဆိုတာ ကျေးဇူးရှိရင် ကျေးဇူးပြန်သိရပါမည်။ကျေးဇူးရှိက ကျေးဇူးပြန်တုံ့ ပြန်ရပါလိမ့်မည်။
“ငါ့သမီးလေးဒီအဖြစ်မျိုးကြုံရတာ ဖေကြီးအပြစ်ကြောင့် ။နက္ခတ်သဘင်ပွဲသမီးမသွားချင်ဘဲ အတင်းလွှတ်မိလို့ ဒီလိုအသိမ်းပိုက်ခံရတာ.”
မချိတင်ကဲ ကြေကွဲစွာရေရွတ်လျှက် ဖေကြီးသည် သူ့ ကုိယ်သူ အပြစ်တင်မဆုံးနိုင်အောင် ၇ှိလေသည်။
“ဖြစ်ပြီးသားကိစ္စကို ဘယ်သူဘယ်ဝါကြောင့်လို့ တရားခံရှာပြီးအပြစ်တင်လည်း အကြောင်းမထူးပါဘူးဖေကြီးရယ်..စိတ်မကောင်းဖြစ်မယ့်အစား အကြောင်းတိုက်ဆိုင်တယ်လို့ ပဲမှတ်လိုက်ပါနော်၊ သမီးတို့ ဘယ်လောက်ချစ်ကြပေမယ့်လဲ တစ်နေ့ မှာ သေကွဲမကွဲလဲ ၇ှင်ကွဲ ကွဲရမှာအသေအချာပဲလေ။အနှေးနဲ့ အမြန်သာကွာပါတယ်။ဖေကြီးသာ စိတ်ချမ်းသာအောင်နေပါနော်။”
လောကမှာ ဖြစ်ချင်တာ မဖြစ်ရပေမယ့် မဖြစ်ချင်တာလဲ ဖြစ်ရတဲ့ဘ၀ပါလား။
သူမတို့ သားအဖ စိတ်နှလုံးမချမ်းမြေ့ သော်လည်း မဟာရာဇာက တော့ အလိုဆန္ဒပြည့်ပြီမို့ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ရှိနေတော့မည်။
.သုဇာ..ကလဲ သခင်မလေးနောက်က ထဘီစဆွဲပြီး ရွှေနန်းတော်ရောက်ချေသေးရဲ့ ဆိုပြီး ၀မ်းသာနေပေလိမ့်မည်.။
သူမမှာသာ...သက်ဦးဆံပိုင် ဒေသရာဇ်ခေတ်၏ ခေါင်းမဖော်ဝံ့သော ပြည်သူတွေထဲမှာ တစ်ယောက်အပါအ၀င်မို့မင်းအာဏာကို မပယ်ဝံ့ခဲ့ပါ....။
* * * * * * * * * * * * ** * * * ** * * ** * ** * * * * * * *
မထင်မှတ်ပဲ ကောသမ္ဗီပြည့်ရှင် ဘုရင်ဥတေ၏ အဂ္ဂမဟေသီ မိဖုရားကြီး ဖြစ်လာပေမယ့် သူမအဖို့ ဘာမှမထူးခြား။အမြင်တင့်သော်လည်း အနှစ်မပါသော အကာသက်သက် ဟုသာထင်မိသည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာတော့ ဘုရင့်မိဖုရားကြီးဟူသောဂုဏ်ပုဒ်သည် အထင်ကြီးဖွယ် နှစ်သက်မက်မောဖွယ်
ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။စင်စစ်မှာတော့ စိတ်ချမ်းသာလွတ်လပ်ခြင်းမှ အနှောင်အဖွဲ့ အကျဉ်းအကျပ်ထဲသို့ ကျရောက်ခဲ့ရသော ဘ၀ပြောင်းလဲမှုပါဘဲ။
ကျေးဇူးရှင် “ဃောသက” သူဌေးကြီးနှင့်တကွ အသိုင်းအ၀ိုင်းမိသာစု အားလုံးဘေးကင်းရန်ကွာ ချမ်းသာကြပါစေခြင်းငှာ မိမိကိုယ်ကိုယ် အနစ်နာခံခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ စတေးလိုက်ခြင်းအတွက်မိမိဘ၀မှာ ကြည်နူးဖွယ်ရာ ရသ တစ်ခုကိုတွေးမိတိုင်း ၀မ်းသာရပါသည်။
သူမအနေဖြင့် မဟာရာဇာအပေါ်မှာဇနီးမယားတစ်ယောက်ရဲ့တာဝန်ဝတ္တရားကို တတ်နိုင်သမျှ ကျေပွန်အောင် နေခဲ့ပါသည်။မိန်းမသားဘ၀ဆိုတာ တစ်ကယ်တော့ ပေးဆပ်ခြင်းသက်သက်ပါလား။
မိန်းမတစ်ယောက်ကို ချစ်မြတ်နိုးလှပါသည် ဆိုသော ပုရိသ ယောင်္ကျား တို့ ၏ဂရုစိုက်အရေးပေးမှုသည်
အမှန်စင်စစ် သူတို့ ၏အလိုရမ္မက်နှင့် အာသာဆန္ဒ ကိုဖြည့်စွက်ခြင်းသက်သက်မျှသာဖြစ်သည်။
“ယောက်ျားတို့ စိတ် မြင်တိုင်းညိတ်လျှက်၊ ဆိတ်၏အလား၊ နွား၏သဘော ၊အာရုံပြောတိုင်း လိုက်လျောထွေပြား။သူအခြားနှင့်...” ဆိုသည့်စကားကဲ့သို့သူမအားချစ်မြတ်နိုးလှပါသည်ဆိုသော
မဟာရာဇာသည် ဥဇ္ဇေနီပြည် မှ “စဏ္ဍပစ္စောတမင်း” ၏သမီးတော် “၀ါသုလဒတ္တ” အား ဆင်ဖြင့်ခိုးယူကာ
တောင်ညာစံမိဖုရားမြှောက်ခဲ့သည်။ထိုမျှမကသေး ကုရုတိုင်းမှပုဏ္ဏားမျိုးနွယ် “မာကဏ္ဍီ ”ဆိုသည့်
အလှကညာတစ်ပါးက်ိုလည်း မေတ္တာပွားပြီး မြောက်ညာစံမိဖုရားမြှောက်ခဲ့ပြန်ပါသည်။
သူမကိုယ်တိုင်က ဘုရင့်မိဖုရားခေါင်ကြီးဆိုသော ဂုဏ်ပုဒ်ကို ငမ်းငမ်းတက် မမက်မောသူမို့ မယားသုံးယောက်စင်ပြိုင်ထားသော်လည်းမနာလိုဝန်တိုစိတ်မရှိခဲ့ပါ။မဟာရာဇာကိုလည်းမိမိတစ်ယောက်တည်းပိုင်ဆိုင်လိုစိတ်ဆိုတဲ့လောဘတဏှာ မ၀င်ပူးသောကြောင့်
ပြီးတော့ ပန်းသည် ဒေါ်သုမနအိမ်မှာ မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ တရားရေအေးကို အမေဒေါ်ခုဇ္ဇုတ္တရာ နာကြားခဲ့ပြီး သူမအားတဆင့်ပြန်လည်ဝေမျှပေး
လို့ သူမကိုယ်တိုင်လည်း လောကအပူ သောကအပူတွေ ကို ဓမ္မတည်းဟူသော မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ တရားရေအေးမှာ အေးချမ်းစွာနေခွင့်ရခဲ့ပြီလေ။
*** ဘ၀ဟူသည် အိမ်မက်ပမာမျှသာဖြစ်သည်။အိပ်ရာမှနိုးထလာသောအခါ အိမ်မက်သည် ပြယ်လွင့်ကုန်ဆုံးပျောက်ပျက်ရမြဲသာတည်း။
ဤခဏတာဘ၀တိုတိုလေးတွင် အပြစ်ကင်းကင်း နဲ့ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းလေး နေတတ်ရန်သာအရေးကြီးသည်။ထိုသို့ ငြိမ်းချမ်းစွာနေနိုင်ဖို့ 
လောက၌လည်းကောင်း၊မိမိရင်၌လည်းကောင်း ဓမ္မတည်းသောဟူသောတရားရှိဖို့ လိုသည်။
လောက၌လည်းကောင်းမိမိကိုယ်၌လည်းကောင်း တရားတည်းဟူသောဓမ္မမရှိလျှင် စစ်မှန်သောငြိမ်းချမ်းခြင်းဘယ်တော့မှမရှိနိုင်။
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ နဲ့ တစ်နိုင်ငံ စစ်ပွဲတွေ ဖြစ်နေတာ .တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး လောဘ ဒေါသ မာန တွေနဲ့ ညှင်းဆဲသတ်ဖြတ်နေတာ
အချင်းချင်းရန်ငြိုးဖွဲ့ မုန်းတီးနေကြတာတွေဟာ ဓမ္မတည်းဟူသော တရားအမှန်ကို နှလုံးမသွင်းတတ်လို့ ပါဘဲ။
တဏှာ၏အလိုကိုချဲ့ ထွင်ပွားစီးနေသူသည် ဘ၀ကို တက်မက်နေသူများသာတည်း။ထိုသူတို့ သည် ဘ၀၏ မမြဲ-ဆင်းရဲ-အနှစ်မဲ့-မတင့်တယ်မှု-သဘောာတို့ ကိုမမြင်။မြဲခြင်း-ချမ်းသာခြင်း-အနှစ်ခိုင်မာခြင်း-တင့်တယ်ခြင်းအသွင်ထင်နေတတ်၏။လောက၌ အမှန်ဆည်းကပ်ကိုးကွယ်ရမည်မှာ.လောဘ-မောဟ-ဒေါသ-က္ကုဿ။မစ္စရိယ၊ နဲ့ ယှဉ်သော အကုသိုလ်မဟုတ်။အရိုးကိုအရေဖုံးထားသည့်
မတင့်တယ်ဖွယ်ခန္ဓာမဟုတ်၊ အိုခြင်း-နာခြင်း-သေခြင်း သဘော၇ှိသော မမြဲသည့်ဘ၀ မဟုတ်။ရတနာသုံးပါးနှင့် မြတ်ဗုဒ္ဓ ၏ တရားများသာ
ဖြစ်သည်။မြတ်ဗုဒ္ဓ ၏တရားသည်သာ အားကိုးရာအမှန်ဖြစ်သည်။ရတနာသုံးပါး ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်မှာလည်း
မိမိနှင့်ဆက်ဆံရေရသော ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လောကအတွက် အမှနတကယ်ငြိမ်းချမ်းဖို့ ရာ ဓမ္မတည်း။
ဓမ္မနှင့်ယှဉ်၌ ဖြည့်စွက်ရမည့်အားမှာ ဗြဟ္မစိုရ် တရားလေးပါးဖြစ်၏ ဗြဟ္မစိုရ်တရားဟူသည်ကာ..
(၁) အယုတ်အလတ်အမြတ်မရွေး သတ္တ၀ါအားလုံးအပေါ်မှာ ချစ်ခင်ခြင်း (မေတ္တာ)
(၂)မိမိထက်နိမ့်ပါး၊ဆင်းရဲသောသူများအပေါ် သနားကြင်နာစွာ စောင့်ရှောက်တတ်ခြင်း (ကရုဏာ)
(၃)မိမိထက်သာသော၊ မြင့်မြတ်သောသူများအပေါ်မနာလိုစိတ် က္ကုဿ မဖြစ်ပဲ ၀မ်းမြောက်ခြင်း (မုဒိတာ)
(၄)မိမိရန်သူ၊ချစ်သူ ခင်သူမခွဲခြားပဲ အားလုံးအပေါ်မှာ အညီအမျှလျစ်လျူပြုခြင်း (ဥပေက္ခာ)
လောကသားတို့ အားစုစည်းသိပ်သည်းခြင်းကိုဖြစ်စေသည်။ ထိုမေတ္တာသည် မိဘချစ်၊ သားသမီးချစ်၊ သမီးရည်းစားချစ်၊လင်မယားချစ်၊
နှင့်လုံးဝမသက်ဆိုင်၊လောကသားတို့ အပေါ်ဆင်းရဲချမ်းသာမရွေး၊ လူမျိုးဘာသာမရွေး၊ အယုတ်အလတ်အမြတ်မရွေး တစ်ပြေးညီချစ်သောအချစ်၊ လောကအချစ်ကို ဆိုလိုသည်။ တက်မက်သောလောဘတဏှာ၊အမျက်ထွက်သော ဒေါသတဏှာ မရှိ အဖြူထည်သက်သက်ဖြစ်သည်။မဟာလူသားဖြစ်သော မြတ်ဗုဒ္ဓ သည် ဒေ၀ဒတ်-အင်္ဂုလိမာလ-သားတော်ရာဟုလာ တို့အားလုံးအပေါ်မည်သူ့ ကိုမျှ အပိုအလိုမ၇ှိ မေတ္တာတော်အနန္တဖြင့် ညီတူညီမျှချစ်ခင်သည်။
သူမကိုယ်တိုင်သည်လည်း မဟာရာဇာအပေါ်၌လည်းကောင်း၊၀ါသုလဒတ္တ အပေါ်၌လည်းကောင်း၊ မာကဏ္ဍီ အပေါ်၌လည်းကောင်း၊
လောကလူသားတို့ ၏ ဆင်းရဲမှုကို သနားခြင်း၊ဖယ်ရှားပေးလိုခြင်း၊ကယ်တင်လိုခြင်း၊တို့ သည် “ကရုဏာ” တရားပင်ဖြစ်သည်။
လောက၏အကျိုးစီးပွါးကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကရုဏာတရားလောက် အစွမ်းထက်သောတရားမရှိ၊နိုင်ပေ၊
“မုဒိတာ”ဆိုသည်ကာ သူတစ်ပါးပြည့်စုံကြွယ်ဝမှု၊ အဆင့်အတန်းမြင့်မှု၊ဂုဏ်သတင်းကြော်ကြားမှုတို့ ၌ မနာလို-က္ကုဿ မရှိ၊ မိမိထက်သာလွန်စေခြင်း၊သာလွန်သည့်တိုင်ဝမ်းမြောက်နိုင်စွမ်း၇ှိသည်။အလုံးစုံသောချမ်းသာသည့်လူသားအားလုံးအပေါ်၌ တစ်သားတည်း
“ဥပေက္ခာ” ဟူသည်ကား အကျိုးတစ်စုံတစ်ရာ၌ ပြုခဲ့မိသော အတိတ်ကံ ပစ္စုပ္ပန်ကံ သာလျှင်အကြောင်းတရားဖြစ်သည်ဟု ၀မ်းမနည်း။ ၀မ်းမသာ လျစ်လျူပြုရသည်မဟုတ်၊မိမိပြုခဲ့မိသော အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသည့်အကျိုးတစ်စုံတစ်ရာမျှော်လင့်ခြင်းကိုသာ
မိမိအပေါ်ရန်ငြိုးထားလျှက် အသက်ကိုရန်ပြုတတ်သူကိုပင် မိမိ၏သည်းခံခြင်းအရည်အသွေး အရောင်တင်ရာ၌ ပါရမီဖြည့်ဖက်အဖြစ်
အသိအမှတ်ပြုကာ ခွင့်လွှတ်နိုင်ရမည်လို့ မြတ်ဗုဒ္ဓဟောထားပါသည်။
မဟာရာဇာ ၏ တတိယမြောက်ကြင်ယာတော်...
“မာကဏ္ဍီ”..သူမ အခန်းထဲသို့ တစ်လှမ်းချင်းဝင်လာနေသည်။
နတ်မိမယ်အလား လှနိုင်လွန်းသည့်သူ ထိုအလှကြောင့်ပင် မာန်တက်နေသောအသွင် ထက်မြတ်စူးရှသောမျက်လုံးနဲ့ ဟန်ပန်အမူအရာ ဘုရင့်မိဖုရားတစ်ဦးပေမို့ သူမထိုင်နေသောညောင်စောင်းမှအသာလေးနေရာရွေ့ ပေးလိုက်သည်။သူမအခြွေအရံဖြစ်သော သုဇာ၊မုဒြာနဲ့ အမေခုဇ္ဇုတ္တရာ တို့ က “မာကဏ္ဍီ” အားနှစ်သက်ပုံမရပါ။သူမကမူ အလေ့အကျင့်ရပြီးသားမို့ သူမထံရောက်လာသူမှန်သမျှ
ကျန်းမာ ချမ်းသာ ပါစေကြောင်း မေတ္တာဖြန့် ကျက်ပေးပါသည်။
ဟူသောစကားနှင့် တစ်ပြိုင်တည်းသူမနဲ့ ပခုံးချင်းယှဉ်ပြီး ၀င်ထိုင်လိုက်သည်။သူမနှင့်တန်းတူပါဆိုသည့်အချက်ကို အမူအရာနှင့်ပညာပြလိုက်မှန်းသိနေပါသည်။
“သာမာ နဲ့ ဝါသုလတို့ မိဖုရားနှစ်ပါးလုံးကျွန်မကို လိုက်လျောကြိုဆိုမှု မရှိတာဘာလို့ လဲ။မနှစ်သက်ကြဘူးလား ”
“ကိုယ်တို့ နှစ်ယောက်လုံးဟာ အေးအေးဆေးဆေးနေကြတဲ့သူတွေပါ မာကဏ္ဍီ”
“ထားပါတော့လေ သာမာ့အဆောင်ကို ကျွန်မလာတာရော ကြည်ဖြူလိုလားပါရဲ့ လား”
“ဧည့်သည်ဆိုတာ မဖိတ်ပဲနဲ့ လဲ လာတတ်ပါတယ်၊ဖိတ်ပေမယ့်လည်းလာချင်မှလာတတ်တယ်၊လာတဲ့အတွက်အတွက်ရော
မလာတဲ့အတွက်ရောကိုယ့်မှာ ဘာခံစားချက်မှမ၇ှိဘူး။အိမ်ရှင်ဝတ္တရား ကျေဖို့ ကိုပဲကိုယ်အလေးထားတယ်”။
“မဟာရာဇာကဧည့်သည်မှမဟုတ်ပဲ မာကဏ္ဍီ သူကအိမ်ရှင် အိမ်ဦးနတ်လေ သူပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မိဖုရားဆီလာတာလေ။
ကိုယ့်အနေနဲ့ ဇနီးမယားတစ်ယောက်ရဲ့ ဝတ္တရားကျေအောင်တော့ အမြဲဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့ပါတယ်။
မာကဏ္ဍီအနေနဲ့ အယူအဆရော စကားတွေပါ ရောထွေးလို့ မရပါဘူး”
မာကဏ္ဍီ မျက်နှာတစ်ချက်တော့ပျက်သွားသည်။သို့ သော်ပါးနပ်စွာချက်ချင်း ပြန်ပြုံးပြနိုင်သည်။
“သာမာကစကားပြောတာတော်တယ် ဒါ့ကြောင့် မဟာရာဇာ က သာမာ့ကို အမြဲဦးစားပေးတယ်ထင်ပါရဲ့ ”
မာကဏ္ဍီရဲ့ မျက်နှာပြုံးမြမြရှိနေပေမယ့် မျက်လုံးကိုထိုးဖောက်ပြီးရင်တွင်းက စိတ်ထားမှာတော့ မနာလို ၀န်တိုခြင်း
က္ကုဿာမစ္ဆရိယ ခြံရံထားတဲ့ ကိလေသာ ခိုးတွေလျှံဝေနေပေလိမ့်မည်။
“ဒါက မဟာရာဇာနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ကိစ္စပါ။ကိုယ့်အနေနဲ့မဟာရာဇာအပေါ်ထားတဲ့မေတ္တာမျိုး မာကဏ္ဍီနဲ့ ဝါသုလတို့ မိဖုရားနှစ်ဦးလုံးအပေါ်မှာ အတူတူပဲထားတယ်။
ကိုယ့်ဘက်က ဖြူစင်မွန်မြတ်တဲ့ စေတာထားရင် အဲ့ဒီစေတနာနဲ့ တူမျှတဲ့အကျိုးကို တစ်နေ့ ခံစားရ မှာဘဲ
စေတနာသည် ကံတဲ့ ဒါ့ကြောင့်ကိုယ့်ရင်ထဲမှ ကောင်းမြတ်ဖြူစင်တဲ့စိတ်စေတနာ၇ှိအောင်ပဲကြိုးစားခဲ့တယ်။”
“သာမာ့ရဲ့ အတွေးအခေါ်ပညာလေးက ဆန်းလှချေလား ”
ကိုယ့်ရဲ့ အတွေးအခေါ်မဟုတ်ပါဘူးမာကဏ္ဍီ မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ အဆုံးအမ ဓမ္မတရား ပါ”
ဘာ- ဗုဒ္ဓ -ဟုတ်လား”
အံ့သြမှု-ခက်ထန်မှု- တင်းမာမှုများ မာကဏ္ဍီ၏ မျက်နှာပေါ်မှာ လျှပ်စီးလက်သလို တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးပြောင်းလဲသွား၏။
“ဗုဒ္ဓ ”ဟူသောအသံကို ကြားရတဲ့သူတိုင်း စိတ်နှလုံးနူးညံ့ပျော့ပြောင်းသွားကြရစမြဲဖြစ်ပါလျှက် ယခု “မာကဏ္ဍီ ”ကျတော့
ဘာ့ကြောင့်များရန်သူတစ်ယောက်တွေ့ သလို ခက်ထန်သွားပါလိမ့် စဉ်းစားမရ။
“ဗုဒ္ဓကို သာမာဘယ်တုန်းကတွေ့ ခဲ့လဲ ဘယ်မှာတွေ့ တာလဲ”
“ကောသမ္ဗီပြည်ကို ဗုဒ္ဓကြွရောက်တော်မူခဲ့ပါတယ်.မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ တရားတော်တွေကို ကိုယ်တိုင်မနာကြားခဲ့ရပါဘူး၊
အမေ ဒေါ်ခုဇ္ဇုတ္တရာ ထံကနေဆင့် ဟောပြလို့ သာ နာခဲ့ရတာပါ”
မာကဏ္ဍီမျက်နှာမူရာနံရံ၌ လေသာပြတင်းပေါက် တစ်ပေါက်ရှိနေသည်။
ဗုဒ္ဓအကြောင်းပြောနေရင်းအဆက်အစပ်မ၇ှိ ပြတင်းပေါက်ဆီသို့ ရောက်ပြန်သည်၊သူမဘယ်လိုဖြေရမှန်းမသိ။
“ဘယ်လိုလဲသာမာ၊ဒီပြတင်းပေါက်က ဘာ့အတွက်ဖောက်ထားတာလဲဆိုတာ မဖြေနိုင်တော့ဘူးလား”
မဟာရာဇာ လေသံဖမ်းပြီးသူမအားစစ်လားဆေးလားလုပ်နေသည်မှာ စိတ်ပျက်စရာတော်တော်ကောင်းလှပါသည်။
သူမကိုယ်တိုင် ဒေါသကိလေသာ မ၀င်မိအောင် သတိလေးနဲ့ စိတ်ကိုဆုံးမထားနေသည်မို့ သည်းခံနေနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။
“ဗုဒ္ဓကို ကိုယ်တိုင်ဖူးတွေ့ ရဖို့ မလွယ်ဘူးလေ ၊ဒါ့ကြောင့် ဗုဒ္ဓ နဲ့ သာဝကတွေ ဆွမ်းခံကြွလာတဲ့ အချိန်မှာဖူးတွေ့ နိုင်အောင်ဖောက်ထားတာပါ”
သူမရဲ့့အဖြေသည် မဟာရာဇာအမျက်ရှ စေနိုင်သောအဖြေဖြစ်မည်ကို သိနေပါသော်လည်း လိမ်လည်ခြင်းမပြုပဲ အမှန်အတိုင်းသာ ၀န်ခံလိုက်သည်။သောတပန်တို့ မည်သည် ငါးပါးသောသီလကို အသက်နှင့်လဲ၍ လုံခြုံအောင်စောင့်ရှောက်တတ်၏။မိမိအသက်ကိုသာအသေခံမည် သီလကို တော့အကျိုးမခံပါ။ဒီလိုမြင့်မြတ်တဲ့
တရားနဲ့ ကိုယ်ကျင့်သီလကို မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ သာသနာမှာသာ နာကြားခွင့် ကျင့်ကြံခွင့်ရခဲ့သည်ပဲ။သူမ ရတနာသုံးပါးကို အသက်နှင့်လဲဤကြည်ညိုမိပါသည်။
“မဟာရာဇာသိရဲ့ လား သာမာ”
“မသိဘူး မာကဏ္ဍီ မကောင်းမှုအကုသိုလ် လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူး၊မင်းအာဏာကို ထိခိုက်တာမဟုတ်ဘူးလေ”
“ဒါပေမယ့် ကိုယ်တို့ ဘာသာတရားနဲ့ မဇ္ဈိမအမျိုးသမီးတွေရဲ့ ဓလေ့ထုံးတမ်းကို ချိုးဖောက်ရာကျတယ်လေ
ကိုယ့်ခင်ပွန်းရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ အခြားတစ်ယောက်ကိုအမြဲ ကြည့်တာဟာ အပြစ်လေ ”
သူမကို “မာကဏ္ဍီ ” အထင်လွဲနေပြီပဲ..
“ဗုဒ္ဓဟာ ကိလေသာပြည့်နေတဲ့ သာမန်လူသားမဟုတ်ဘူး မာကဏ္ဍီ ကိလေသာတဏှာကင်းနေတဲ့ကြည်ညိုစရာ
ပုဂ္ဂိုလ်ထူး ။လူသားတွေကို ကိလေသာတဏှာနွံကနေ ချမ်းသာခြင်းဆိုတဲ့ နိဗ္ဗာန်ရောက်အောက်တရားပြပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်
မြတ်ဘုရား၇ဲ့ တရားတော်ဟာ လူသတ်သမား အင်္ဂုလိမာလကိုယ်တောင် ယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမနိုင်ခဲ့ပါတယ် မာကဏ္ဍီ။
လောကရဲ့ တရားသခင်မို့ 
“ဗုဒ္ဓ ” ကိုသန့် ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့စိတ်နဲ့ ကြည်ညိုတာပါ ညစ်ညမ်းတဲ့ကိလေသာတဏှာစိတ်နဲ့ မဟုတ်ပါဘူး ”
မာကဏ္ဍီ မကျေနပ်စိတ်နဲ့ သူမအားနှုတ်မဆက်ပဲ ထပြန်သွားသည်။
မာကဏ္ဍီ သူမထံသို့ ရောက်လာခြင်း၏အကြောင်းအရင်းကို သိသွားပါပြီ။သူမကိုပြဿနာလုပ်ဖို့ မာကဏ္ဍီ အတွက်ခိုင်လုံသည့်
သူမသည်ကြောက်ရွံ့ တုန်လှုတ်ခြင်းကင်းစွာနဲ့ မဟာရာဇာကို ရင်ဆိုင်လိုက်သည်။ေ၇ွှသမင်ဘယ်ကထွက် ဘုရင်ကြီးတာကထွက်
ဆိုသလို ဒီမေးခွန်းဟာ “မာကဏ္ဍီ” ကနေတဆင့်လာတယ်ဆိုတာ သိလိုက်ပါပြီ။
“မောင်တော် ဘာမေးလိုက်တယ်ဆိုတာ ထပ်ပြီးမိန့် တော်မူပါဦး”
“နှမတော်ရဲ့ အဆောင်မှာ ထူးထူးခြားခြား ပြတင်းပေါက် ဖောက်ထားတာ တွေ့ မိလို့ မေးတာပါ”
မဟာရာဇာက မသိသလို ထပ်ပြောပြပေမယ့် “မာကဏ္ဍီ” ရဲ့ ချွန်တွန်း စကားဆိုတာ သူမသိနေပါသည်။
“နှမတော် မောင်တော့်အပေါ်မှာ လိမ်ညာမပြောတတ်ဘူးဆိုတာ ယုံပါသလား မောင်တော်”
“ယုံပါတယ် နှမတော် မောင်တော့်အပေါ်မှာ အမြဲတမ်း နူးညံ့သိမ့်မွေ့ စွာပြောတဲ့ နှမတော်ဟာ မညာတတ်ဘူးဆိုတာ
ပန်းသည်ဒေါ်သုမန အိမ်မှာ အမေ ခုဇ္ဇုတ္တရာ ပန်းသွားဝယ်ရင်း မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ တရားတော်ကို နာကြားခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။
အရင်တုန်းက မောင်တော် ပေးနေကျပန်းဖိုး ရှစ်ကျပ် ကို လေးကျပ်ဖိုး ပဲဝယ်ပြီးကျန်တဲ့လေးကျပ်ကို ခိုးယူခဲ့ပေမယ့်
မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ တရားတော်ကို နာကြားခွင့်ရပြီးတဲ့နောက်မှာ ခိုးချင်တဲ့ အကုသိုလ်စိတ်တွေ လုံးဝမရှိတော့ဘူးတဲ့.
ငါးပါးသီလ ကိုလည်း ကျုးလွန်လိုတဲ့ဆန္ဒမ၇ှိတော့ဘူးတဲ့။
ခန္ဓာရဲ့ ဒုက္ခ ဘ၀ရဲ့ အပြစ်တွေကို လဲ သိမြင်ခဲ့တယ်တဲ့။ဒါ့ကြောင့် နှမတော် လဲ အမေ ခုဇ္ဇုတ္တရာ သိတဲ့တရားတွေကို ကိုယ်တိုင်သိချင်လို့တဆင့်ဟောပြခိုင်းခဲ့ပါတယ်။မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ တရားတော်ကို အမေခုဇ္ဇုတ္တရာ.ကနေတဆင့်နာကြားခွင့်ရလို့ 
မြတ်ဗုဒ္ဓကို လေးစားကြည်ညိုမိပါတယ်။ မြတ်ဗုဒ္ဓကို ကိုယ်တိုင်ဖူးတွေ့ ပြီး ကိုယ်တိုင်တရားနာချင်ပေမယ့်
မဇ္ဇျိမ ဓလေ့အရ အမျိုးသမီးတွေ အိမ်တွင်းပုန်းရမယ်၊ ပြင်ပနဲ့ ကူးလူးဆက်ဆံခွင့် မရှိလေတော့၊နှမတော်တို့ 
မှာအပြင်ထွက်ပြီးမြတ်ဗုဒ္ဓကို ဖူးမြော်ကြည်ညိုခွင့် မရခဲ့လို့ ပြတင်းပေါက်ဖောက်ပြီး ဖူးတွေ့ မိပါတယ်မောင်တော်”
ပြီးတော့ မင်းအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ မငြိစွန်းမထိခိုက်လို့မောင်တော့်ကို အသိမပေးပဲဖောက်ထားခဲ့မိတာပါ”
အချက်အလက် ခိုင်မာစွာနဲ့ သူမရှင်းပြတော့ မဟာရာဇာပြုံးလျှက်ခေါင်းညိတ်နေ၏။
“နှမတော်ကို မောင်တော် မြတ်နိုးတာ အမှန်တရားကို ရင်ဆိုင်ရဲတဲ့ သတ္တိ၇ှိတယ်၊စိတ်ထားမြင့်မြတ်တယ်
“ဗုဒ္ဓကို ကိုယ်တိုင်ဖူးတွေ့ ချင်သလားနှမတော်”
ပြုံးနေရာမှ ချက်ချင်း ခက်ထန်သောစကားမျာကြောင့်သူမအံ့သွားရပါသည်။ဘယ်လိုသဘောထားဖြင့်မေးမှန်းမသိပေမယ့်
အမေး၇ှိလာတော့ အဖြေရှိရ မှာမို့ သူမရင်ထဲက အတိုင်းဖြေလိုက်ပါသည်။
“တစ်ကယ်ကြည်ညိုမိတာမို့တစ်ကယ်ဖူးတွေ့ ချင်ပါတယ်မောင်တော် .တက်မက်တဲ့ တဏှာစိတ်နဲ့ မဟုတ်ပါဘူး
လောကရဲ့ တရားသခင် မို့ လေးစားစိတ်နဲ့ ဖူးမြော်ကန်တော့ချင်ရုံသက်သက်ပါ။တရားနာချင်ရုံသက်သက်ပါမောင်တော်”
သူမ မဟာရာဇာ မျက်ဝန်းကို မော်ကြည့်မိတော့ ဒေါသဝေနေတဲ့ အငွေ့ အသက်တွေ တွေ့ နေရပါသည်။
“ဒါဆိုရင် ဗုဒ္ဓအပေါ်သက်ဝင်ကြည်ညိုသူတွေအားလုံးကို မောင်တော်က သေဒဏ်ပေးမယ်ဆိုရင်ကော”
သူမရင်ထဲ ဟာခနဲဖြစ်သွားသည်၊မဟာရာဇာ ၏ အသိညဏ်တွေ နားလည်မှုတွေ “မာကဏ္ဍီ ” ရဲ့ ပယောဂ ၀င်ပူးခံနေရပြီးလား။
နှလုံးသားတစ်ခုလုံး တုန်လှုတ်သွားမိသည်။သေခြင်းတရားကို ကြောက်ရွံ့ လို့ တော့မဟုတ်ပါ။ ဗုဒ္ဓ အပေါ်မောင်တော် အထင်မှားအမြင်မှားလို့ စော်ကားခဲ့ရင် အကုသိုလ်အပြစ်ကြီးမှာစိုးသောကြောင့်
မောင်တော့် အပေါ်သနားဂရုဏာစိတ်နဲ့ တုန်လှုတ်သွားတာပါ။
“ပြောလေ နှမတော် သေဒဏ်ကျခံပြီး ဗုဒ္ဓ ကို ကိုးကွယ်ဝံ့သလား”
သူမအသက်ကို ပြင်းပြင်းတစ်ချက်ရှူသွင်းပြီး စိတ်ကို တည်ငြိမ်သွားအောင် ဓမ္မအားသစ်တွေစုစည်းလိုက်သည်။
“ဗုဒ္ဓကို ကြည်ညိုမိလို့ သတ်မယ်ဆိုရင် အသေခံရဲပါတယ်မောင်တော် ..ဘာလို့ လဲဆိုတော့ မှန်ကန်တဲ့အတွေးအမြင်တွေ သိခွင့်ရသွားလို့ ပါဘဲ။ဗုဒ္ဓရဲ့ လမ်းညွှန်ဆုံးမမှုတွေဟာ ဗြဟ္မဏတွေ ကိုးကွယ်နေတဲ့ အယူအဆ တွေထက်သာလို့ မြင့်မြတ်လို့ ပါပဲ ။
အခုဆိုရင်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့မင်းမျိုးမင်းနွယ်တွေအားလုံး မင်းစည်းစိမ်ချမ်းသာတွေစွန့် ပြီးသာသနာ့ဘောင်မှာ ပျော်မွေ့ နေတာဟာ စစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းခြင်းတွေ
တွေ့ သွားလို့ ပါဘဲ။ ဗုဒ္ဓဟာ ဘာသာ သာသနာအတွက် လူသတ်ပြီး မစည်းရုံးဘူး။ဗုဒ္ဓ၀ါဒ ကိုလက်ခံနိုင်အောင်
မေတ္တာတော်နဲ့ သွန်သင်ညွှန်ပြပေးခဲ့ပါတယ်၊ ဗုဒ္ဓ ရဲ့ တရားတော်တွေအားလုံးဟာ အကြောင်းအကျိုးခိုင်လုံတယ်။
ဝေဖန်ဆန်းစစ်နိုင်တယ် ၊မေးမြန်းဆွေးနွေးနိုင်တယ်၊ မှန်မမှန်သေချာအစမ်းသပ်ခံနိုင်တယ်၊တစ်ဖက်စွန်းရောက်တဲ့ အယူဝါဒမဟုတ်ဘူး။တစ်ကယ်ကျင့်ကြံခဲ့ရင် လက်တွေ့ ဘ၀မှာပဲ လောဘ ၊ဒေါ ၊မောဟ
ကင်းစွာနဲ့ စိတ်ချမ်းသာခြင်း။စိတ်တည်ငြိမ်ခြင်း တွေခံစားရတယ်၊။ ဗြဟ္မဏ အယူအဆတွေထက်သာလို့ နှမတော် ကိုးကွယ်ကြည်ညိုမိတာပါ။
အသက်ထက်ဆုံးကြည်ညိုကိုးကွယ်ဆည်းကပ်မှာမို့ သတ်ရင်လဲသေရဲပါတယ် မောင်တော် ၊သေခြင်းတရားဆိုတာ လူတိုင်းတွေ့ ကြုံရမယ့်တရားပါ။နှမတော်စောင့်ထိန်းခဲ့တဲ့ ငါးပါးသီလနဲ့ ရတနာသုံးပါး အပေါ်အသက်ပေးပြီးကြည်ညို ရတဲ့ ကုသိုလ်စိတ်ဟာ သံသရာတစ်လျှောက်လုံးမှာ အမြင့်မြတ်ဆုံးအဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်သွားမှာပါ။”
သူမရဲ့ ပြတ်သားသောစကားများကြောင့် မဟာရာဇာ မျက်နှာပြန်ပြုံးလာပါသည်၊သည်တော့မှ မဟာရာဇာ့ပရိယာယ် ကို သူမ ကောင်းစွာသိသွားပါသည်။
“ထပ်ဆင့်တိုးပြီးလေးစားရပါတယ် နှမတော်..... နှမတော်ကို မောင်တော်ထပ်ပြီးဆုချီးမြှင့်တော်မူမယ်”
မဟာရာဇာ ပေးတဲ့ဆုကြောင့်ပဲ“ ဗုဒ္ဓ” ကိုလွတ်လပ်စွာ ဖူးမြော်နိုင်
ဖို့ ကျယ်ပြန့် ခမ်းနားသည့်လေသာပြတင်းပေါက်များ သူမအိမ်မှာ ဖောက်ခွင့်ရသွားခဲ့သည်။
“စေတနာသည် ကံ စေတနာမှန်သည့် ကံတရား။”
အနိုင်အရှုံးစကားသုံးရလျှင်တော့ ဒီတစ်ပွဲ သူမနိုင်ပြီး “မာကဏ္ဍီ” ရှုံးသွားသည်ပေါ့။
သူမအားအလဲထိုးမည့် “မာကဏ္ဍီ ” ၏ အကောက်ညဏ်ပွဲစဉ်က ပြီးပြတ်မည်မဟုတ်သေးပါ။ဘာ့ကြောင့်များ သူမကိုရော သူမကြည်ညိုသည့် ဗုဒ္ဓကိုပါ မုန်းနေ၇မှန်းမစဉ်းစားတတ်တော့ပါ။
“ဘာကိုကြားရမှာလဲ သုဇာ ရဲ့အရင်းမရှိအဖျားမရှိ...”
“ပြောချင်စိတ်တွေများသွားလို့ ပါသခင်မလေးရဲ့ဟို...သခင်မ အချစ်တော်လေ...”
“လာပြန်ပြီ..သခင်မအချစ်တော်က ဘယ်သူတုန်း မသိပါလား..”
“ ဘယ်သူ၇ှိရမှာလဲ မာကဏ္ဍီ လေ”
“မာကဏ္ဍီ ဘာဖြစ်လို့ လဲ သုဇာ”
“မြို့ တွင်းမှာ ဆွမ်းခံကြွနေတဲ့ ဗုဒ္ဓကို မာကဏ္ဍီက သူ့ လူတွေနဲ့ လိုက်ဆဲခိုင်းတယ်တဲ့...”
ကြားလိုက်ရတဲ့ စကားက သူမနားကိုယ်ပင်မယုံကြည်နိုင်ပါ။ ရုပ်ကလေး မှုန်နေအောင် လှတဲ့ မာကဏ္ဍီမှာ အဲ့ဒီလိုယုတ်ညံ့တဲ့ စိတ်ထားတွေရှိနေပါလား.မိဖုရားဆိုတဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ နဲ့ တောင် မတန်အောင် အောက်တန်းကျလှချေလား။
“ဗုဒ္ဓကို ဘာလို့ များ အညှိးတကြီး ရှိရတာလဲနော်..”
”“အဲ့ဒီအကြောင်းလား ကျွန်မ သိပါတယ် သခင်မလေး..”
“ဆိုစမ်းပါဦး မုဒြာ က သိလှချေလား..”
“မာကဏ္ဍီ တို့ နယ်မှာ ကျွန်မတို့ အမျိုးတွေ ၇ှိတယ် သခင်မလေး၊ သူတို့ ပြောပြတာက.. မာကဏ္ဍီ ကို မဟာရာဇာ မတွေ့ ခင်က
ချောလွန်းလှလွန်းလို့ တဲ့ သူ့ မိဘတွေက တော်တန်ရုံယောင်္ကျားတွေနဲ့ မတန်ဘူးဆိုပြီး ဗုဒ္ဓနဲ့ သွားစပ်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓ က အပုတ်ကောင်ကို သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ မာကဏ္ဍီ ကို ယူဖို့ မပြောနဲ့ လက်နဲ့ တောင် မတို့ ထိဘူး လို့ ပြန်ပြောတော့
သူ့ လို အချောအလှကို အပုတ်ကောင်လို့ ပြောရကောင်းလား ငြင်းရကောင်းလားဆိုပြီး ဗုဒ္ဓ ကို မုန်းတီးနေတာလေ သခင်မလေး”
မုဒြာ ပြောပြချက်ကို သြော်....ဟုသာ သူမညည်းတွားမိသည်။
၁၅၀၀ ကိလေသာတဏှာနွံ ကို အရဟတ္တမဂ် ညဏ်နဲ့ ပယ်သတ်ထားနိုင်ပြီ ဖြစ်တဲ့ “ဗုဒ္ဓ ”
သစ္စာလေးပါးတရားကို သိမြင်တော်မူတဲ့ “ဗုဒ္ဓ ”ကိုမှ....၊ဖြစ်မှဖြစ်ရလေ မာကဏ္ဍီ ရယ်။
“ဘာမှတော့မဖြစ်ပါဘူး သခင်မလေး ဗုဒ္ဓ က မာကဏ္ဍီ ဆဲတာကို ဂရုတောင်မစိုက်ဘူးတဲ့ နောက်တော့ မာကဏ္ဍီ လက်ချက် ဆိုတာသိသွားတော့ သူ့ ကိုပဲ လူတွေကမုန်းကြတာပေါ့”
“အေးကွယ်- ဗုဒ္ဓကိုတောင် စော်ကားရဲတဲ့ အကုသိုလ် ကံက သေးတာမဟုတ်ဘူး မာကဏ္ဍီ အတွက် ရင်လေးမိတယ် သုဇာရယ်..”
ရန်ငြိုးဖွဲ့ တတ်သော၊ကောက်ကျစ်တတ်သော၊ ကလဲ့စားချေလိုသော မာကဏ္ဍီ ၏စိတ်သည် ကြောက်စရာကောင်းလှသလို သနားစရာလည်းကောင်းလှပါသည်။အကုသိုလ်ကံ စေတနာနှင့်တူသောအကျိုးကို တစ်နေ့ ရင်ကော့အောင် သူမခံရပေတော့မည်။
ခက်သည်က လောဘ၊ဒေါသ၊ မောဟာ မာန၊က္ကုဿာမစ္ဆရိယ ၊ဆိုတဲ့ကိလေသာအညစ်အကြေးကိုမြတ်ဗုဒ္ဓ ရဲ့ 
တရားရေအေးနဲ့ ဆေးနိုင်မှ ကင်းနိုင်မှာမို့အခုလို ဗုဒ္ဓကိုတောင်မုန်းတဲ့ မာကဏ္ဍီ ဟာ ဗုဒ္ဓရဲ့ တရားနဲ့ ပိုဝေးသွားပြီပေါ့။
မြတ်ဗုဒ္ဓ ပွင့်ချိန်ကြုံပါရက်နဲ့ ဖူးခွင့်မရတာ နှမြောစရာကောင်းလှပါသည်။
“ဗုဒ္ဓ” ကို ပြဿ နာရှာပြီးဘာမှမကြာ..မာကဏ္ဍီ တစ်မျိုးထွင်ပြန်သည်။
“ဗုဒ္ဓ” ကိုမနိုင်သောအခါ မာကဏ္ဍီ၏ မြှားဦးသည် ဗုဒ္ဓ အပေါ် ကြည်ညိုမိသော သူမထံလှည့်လာပြန်သည်။
သူမထံ မင်းမှုထမ်းတစ်ဦးက ကြက် အ၇ှင်များယူလာ၏။
သာမာဝတီ လက်နှင့်ကိုယ်တိုင်သတ်ပြီး မဟာရာဇာ ပွဲတော်တည်ရန် ဟင်းချက်ရမည် ဟု အမိန့် ထုတ်ထားသည်။
ဘုရင်ပွဲတော်တည်ရန် ဘုရင်တစ်ပါး၏အမိန့် မည်သူလွန်ဆန်ဝံ့သနည်း ။
သူမအတွက် မင်းအမိန့် အာဏာကြောက်တာထက် မြတ်ဗုဒ္ဓဟောထားသော အကုသိုလ် တရားပြုလုပ်ရမှာ ပိုကြောက်ပါသည်။
မင်းအမိန့် ဆန့် ကျင်လို့ သေဒဏ်ကျရင် တစ်ဘ၀ပဲနာလိမ့်မည်.အကုသိုလ်ကြောင့် ငရဲကျလျှင်တော့ သံသရာတစ်လျှောက်
နာလိမ့်မည်။သူတစ်ပါးအသတ်ကို သတ်ဖို့ စိတ်တောင်မကူးမိပါ။မိမိအသက်ကိုသာအသေခံသွားမည်။
ထို့ ကြောင့် မဟာရာဇာ၏ စေခိုင်းချက်ကို ရဲဝံ့စွာငြင်းပယ်လိုက်သည်။
( ရှင်းလင်းချက်....သောတပန်တို့ မည်သည် အပယ်ကျနိုင်သည့် ငါးပါးသီလကို
ကျုးလွန်လိုတဲ့ကိလေသာအကုသိုလ်စိတ်ကို ပယ်သတ်နိုင်ပါတယ်။။သာမန်ပုထုဇဉ် တွေစောင့်ထိန်းနေတဲ့ ငါးပါးသီလဟာ အသိတရားနဲ့့တမင်ေ၇ှာင်တာပါ။ကုသိုလ်ရအောင်တမင်ကြိုးစား စောင့်ထိန်းရတာပါ။ကိလေသာအကုသိုလ်စိတ်တွေ လုံးဝကင်းသွားတာမဟုတ်ဘူး။သတိပဌာန်တရား ကျင့်လို့ 
သောတပတ္တိမဂ် ရမှ အလိုလိုကင်းသွားတာပါ။မြတ်ဘုရားရဲ့ တရားတော်ဟာ လက်တွေ့ ဘ၀မှာဘဲ
ကိလေသာ အကုသိုလ်ကင်းပြီး ကိုယ့်ကိုစိတ်ထားမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်စေနိုင်တယ်ပါတယ်၊”)
နောက် မကြာခင် ဗုဒ္ဓအတွက် ဆွမ်းဟင်းလျာချက်ရန်ဟုဆိုကာ ကြက်အသေ တစ်ကောင် ပို့ လာပြန်သည်၊
ဤ တစ်ကြိမ်တွက် ပံ့သကူ အသားပေမို့လက်ခံထားခဲ့ကာ ဗုဒ္ဓ အမှူး၇ှိသော သံဃာတော်တို့ အားလှုဒါန်းလိုက်ပါသည်။
သူမအနေ ဖြင့် မလုပ်သင့်မလုပ်ထိုက်တာကိုငြင်းပြီး လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာကို လက်ခံလိုက်သည့်အတွက် ဘာဘာညာညာမစဉ်းစားပါ။
သုဇာ နှင့်မုဒြာ တို့နှစ်ဦးမှာသာ ထူးဆန်းသည့်အဖြစ်အပျက်အား စုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးထွက်တော့မှ
မာကဏ္ဍီ ၏ ချောက်တွန်းချက်ဆိုတာသိရပါသည်။မဟာရာဇာ ထက် ဗုဒ္ဓနဲ့သံဃာတော် တွေကိုပိုအလေးပေးကြောင်းမဟာရာဇာ
အထင်လွဲအောင် ကြက်အရှင်ပို့ ပြီး ဆွမ်းချက်ရန်အတွက်ကြက်အသေပို့ ခဲ့ပါသည်။
ငါးပါးသီလ ကို သူမနှင့်အခြွေအ၇ံတွေအားလုံး အသက်နှင့်လဲ၍ စောင့်ထိန်းနေတာ မာကဏ္ဍီသိသောကြောင့် မဟာရာဇာအတွက် လက်မခံပဲငြင်းနိုင်အောင် ကြက်အရှင်ပို့ သည်မှာလဲ မာကဏ္ဍီ ၏ လှည့်ကွက်၊မဟာရာဇာ မသိအောင် တိတ်တဆိတ်ဆောာင်ရွက်ခဲ့သော အကောက်ညဏ်၊
သူမမှာတော့ မာကဏ္ဍီ နှင့်တွေ့ ရမှာပင် ကြောက်လှပါသည်။
စိတ်၏ပင်ကိုယ် သဘာဝသည် ဖွေးလက်ဖြူစွတ်နေပါသည်။လူတို့ သည် အခါခပ်သိမ်း စိတ်ထားဖြူစင်မွန်မြတ်သင့်ပါလျှက်
ရံဖန်ရံခါ ကောက်ကျစ်စဉ်းလဲခြင်း မှာ ငါ..တည်းဟူသော အတ္တလွှမ်းမိုးမှု ကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဓမ္မ ကိုကျင့်သုံးခြင်းဖြင့် တက်မက်မှု လောဘတဏှာ၊ ရန်လိုမှု ဒေါသတဏှာ၊ အယူအဆ မှားယွင်းမှု ပပဉ္စ တရားများလည်း နည်းသထက်နည်းလျှက်တဖြေးဖြေး မှေးမှိန်ကွယ်ပျောက်သွားစေနိုင်၏။
မေတ္တာ၊ ကရုဏာတရား ကိန်းဝပ်နေသော နှလုံးသားရှိသူသည် အစဉ်သဖြင့် တည်ကြည်ငြိမ်သက်သော စိတ်ဖြင့် အေးငြိမ်းချမ်းသာစွာနေရ၏။အရာရာတွင် ပပဉ္စ တရားများဖြင့် မြင်၍ လောဘ၊ဒေါသ၊ မောဟ၊ စိတ်တို့ ဖြင့်ကောက်ကျစ်
စဉ်းလဲယုတ်မာသူတို့ မှာ ယင်းတို့ ၏ စေတနာနှင့်ထိုက်တန်စွာ ကိုယ်စိတ်ဆင်းရဲခြင်းသာ ခံစားရပေလိမ့်မည်။ဤသည်ကား “ဓမ္မ” ၏
“ဓမ္မ ” အစစ်၏ အနှစ်သာရ ကို သူမသိမြင်လာသောအခါ ချစ်ခင်မှု၊ ကြင်နာမှု၊ငဲ့ညှာမှု၊ စွန့် လွှတ်အနစ်နာခံမှု နှင့်တူ ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာလည်းတိုးတက်လာပြီး သူမ၏စိတ်အစဉ်မှာလည်း ပို၍ ကြည်လင်လာသည်။
ဒေါ်ခုဇ္ဇုတ္တရာ ထံမှာတဆင့် ဗုဒ္ဓ၏တရားများကို မပြတ်မလပ်နာယူပြီးဝိပဿနာ တရားများ ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့ရတာမို့ သူမ၏စိတ်ဓါတ်နှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားလည်း မြင့်မြတ်လာအောင် အရောင်တင်နိုင်လာသည်။
မဟာလူသား “ဗုဒ္ဓ” ၏ဓမ္မတည်းဟူသော တရား သည် သူမအား လောဘ တည်းဟူသောတဏှာနွံ၌ ခြေမကျွံမိအောင် သတိ၇ှိစေခဲ့သည်။
ရတနာသုံးပါးဆည်းကပ်မှုကို အချိန်များစွာ ပိုပေးထားသောကြောင့် မဟာရာဇာ သူမထံအလာကျဲကာ “မာကဏ္ဍီ” ၏
အချော့အအမြူအယုအယအောက်မှာ တမ်းတမ်းစွဲဖြစ်လာသည်၊။ထို့ အတွက် သူမ မနာလိုဝန်တိုစိတ်မဖြစ်ခဲ့ပါ၊
ငြိမ်းချမ်းမှု ဓမ္မ ကို နှလုံးသွင်းဖို့ အချိန်ပိုရသဖြင့် “မာကဏ္ဍီ” ကိုပင်ကျေးဇူးတင်ရပေလိမ့်မည်။
အချိန်တိုင်းမှာ မဟာရာဇာ “မာကဏ္ဍီ” အပါးမှာ ပျော်မွေ့ နိုင်လျှင် သူမ ပို၍ ၀မ်းသာကျေနပ်ရပေလိမ့်မည်။
အလာကျဲသော မဟာရာဇာ ရုတ်တရက် ရောက်လာသောကြောင့် အံ့သြစွားခရီးဦးကြိုပြုလိုက်ရပါသည်။
ပို၍ထူးခြားသည်က “မာကဏ္ဍီ ” လည်းအတူပါလာသည်။
ဒေါ်ခုဇ္ဇုတ္တရာ ဦးဆောင်သော တရားဆွေးနွေးပွဲကို အရေးပေါ်ရုတ်သိမ်းလိုက်ပြီး အခန်းတွင်းမှ အလျှိုလျှိုထွက်ခွာသွားကြသည်။
မာကဏ္ဍီ ရောက်လာလျှင်ပြဿနာ ပါလာစမြဲမို့ ဒေါ်ခုဇ္ဇုတ္တရာ နှင့်သုဇာတို့တနေရာရာကနေ အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေပေလိမ့်မည်။
မဟာရာဇာက သွားလေရာ ဆောင်တတ်သည့် သူ၏ “ဟတ္ထိကန္တစောင်း ”ကို သလွန်ညောင်စောင်းခေါင်းရင်မှာတင်လိုက်ပြီး သလွန်ညောင်စောင်းမှာထိုင်သည်။မာကဏ္ဍီ မှာမူ ပြတင်းပေါက်နားသွားပြီးခန်းဆီးစကိုင်လိုက် သလွန်ညောင်စောင်းနားလာလိုက်၊စောင်းကိုကိုင်ကြည့်သလို လုပ်လိုက်ဖြင့်ဂနာမငြိမ်ဖြစ်နေသည်။တကယ်တမ်းမှာ မဟာရာဇာအဆောင်ကူးလာလျှင်ဘယ်မိဖုရားကမှ မျက်နှာပြောင်တိုက် လိုက်
“တိုင်းရေးပြည်ရာ အလုပ်တွေများနေလို့ နှမတော်ဆီ မရောက်နိုင်တာကြာပါပေါ့၊မောင်တော့်အပေါ်မှာ ရွှေစိတ်တော် ညိုနေပြီလား နှမတော်”..
“သခင်မလေးရေ...ကွယ်ရင်မေ့ တွေ့ သေအောင်လွမ်း ဆိုတဲ့စကားက ယောင်္ကျားတွေလက်သုံးစကား။ဇနီးမယားနောက်ကွယ်မှာ
နေချင်သလိုနေ ပွေချင်သလိုပွေပြီး ပြန်ရောက်လာတဲ့အခါ ပလီပလာ ကလီကစာတွေ လုပ်ပါရော၊အင်မတန်မှာမာယာများတဲ့ ယောင်္ကျားတို့ ရဲ့မုသားစကားတွေသိလား.......”
အပျိုကြီး မသုဇာ ၏ စကားကိုပြန်လည်ကြားယောင်ကာပြုံးမိရပါသည်။
“မောင်တော့်အပေါ်မှာ ဘယ်တုန်းကမှေ၇ွှစိတ်တော် မညိုခဲ့ဖူးပါဘူး၊မိဖုရားကြီး ရဲ့ နေရာမှာနေရတာမို့့သဘောထားလဲကြီးရမယ်မဟုတ်လားမောင်တော်၊ မဟာရာဇာ စိတ်ချမ်းသာမှ တိုင်းပြည်နိုင်ငံစည်ပင်တိုးတက်အောင်
အုပ်ချုပ်နိုင်မှာမို့ မောင်တော် ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာပါစေလို့ အစဉ်မေတ္တာပို့ လျှက်ပါ”
ဖြုန်းကနဲ ထရပ်ပြီးထိတ်လန့် အံ့သြကြောက်ရွံ့ သွားသော မဟာရာဇာ။
အခန်းတွင်းသို့ ပြေးဝင်လာကြသော မင်းချင်းများ..။
ပြီးတော့ သုဇာ မုဒြာ ဒေါ်ခုဇ္ဇုတ္တရာ နှင့် သူမ၏ ရံရွေတော်များ။
“အိမ်မက်မကောင်းလို့မသွားပါနဲ့ လို့ အတန်တန်တားခဲ့ပါလျှက်နဲ့ .မောင်တော်ရယ်..
မသေကောင်းမပျောက်ကောင်း၊နှမတော်လိုက်လာခဲ့လိုသာပေါ့၊။ တော်တော်အကြံပက်စက်ပါလား သာမာဝတီ
သူမအား လက်ညှိးထိုးပြီး ဆတ်ဆတ်ခါရန်တွေ့ စကားပြောနေသော မာကဏ္ဍီ ကိုသာ အံ့သြစိတ်နှင့် အကြောင်သားငေးကြည့်နေမိသည်။ တိုက်ဆိုင်မှုလား..လုပ်ကြံမှုလား၊ အသိစိတ်တွေကအပြေးအလွှားအဖြေရှာကြည့်၏။
မဟာရာဇာကို အမှတ်မထင်ကြည့်မိတော့ သူမအား စိမ်းစိမ်းကြီး စိုက်ကြည့်ကာ ဒေါသ ခိုးများဝေနေသောအကြည့်မှာ နဂါးတစ်ကောင်သာဆိုလျှင် သူမ ပြာကျသွား ပေလိမ့်မည်။ အချစ်တော်မ၀င် နိုင်တော့အောင် အပြစ်တော်မြင်နေပြီထင့်။
“မြွေ ”ဟု မာကဏ္ဍီ အော်သံ ကြားသည်နှင့် လှည့်အကြည့်၊-ပါးပျဉ်ထောင်နေသောမြွေကိုအတွေ့ ၊ခုန်ထွက်ပြေးလေသော မဟာရာဇာ
သူမနှင့်အလှမ်းဝေးသွားပြီး သူ၏လက်တွင်းမှာ သူမနှလုံးသားတည့်တည့် သို့ ချိန်ရွယ်ထားသော လေးနှင့် မြား။
လေးမြားကို အားသန်သလောက် လက်ဖြောင့်သော မဟာရာဇာ ၏ အန္တရာယ် စက်ကွင်းမှ လွတ်အောင် တိမ်းေ၇ှာင်ဖို့ မလွယ်၊
သူမအားချစ်မြတ်နိုးလှပါသည်ဆိုသော ချစ်သူ၏ လက်ချက်ဖြင့် သေပွဲဝင်ရန်သာ၇ှိသည်။
ထိုစဉ်မှာ သူမအသက်အားကာကွယ်ဖို့ အသေခံရန် အပြေးလာကာ သူမရှေ့ မှာ ကာထားသော ဒေါ်ခုဇ္ဇုတ္တရာ အား တားမြစ်ကာ
“အတိတ်က ပြုခဲ့ဖူးတဲ့ ၀ဋ်ကြွေးရှိရင် ပြေးမလွတ်ပါဘူး အမေ..ပေးဆပ်ရုံသာ၇ှိပါတယ်။မဟာရာဇာ ယခုပြုတဲ့အမှု ဟာ အသစ်ဆိုရင်တော့ သခင်မရဲ့ မေတ္တာစွမ်းအားက ကာကွယ်စောင့်ေ၇ှာက် ပေးပါလိမ့်မယ်။အမေဘေးဖယ်ပြီးသာနေပါ သခင်မ သစ္စာပြုပါ့မယ်”
နှလုံးအိမ်တွင်းမှ ဓမ္မအားသစ်ကို စုစည်းလိုက်သည် လေးနက်တည်ငြိမ်သောစိတ်ဖြင့် မဟာရာဇာ ၏မျက်နှာကို စိတ်ဆိုးခြင်း၊နာကျည်းခြင်း၊ကင်းစွာ မေတ္တာကိုစူးစိုက် ပို့ လိုက်သည်။
မဟာရာဇာ ၏လက်တွင်းမှ လေးညှို့ သည်လည်း တဖြည်းဖြည်းတင်းလာသည်။
“ကျွန်ုပ်၏ ဦးခေါင်းထက်၌ ဗုဒ္ဓကြွရောက်သီတင်းသုံးတော်မူပါစေသတည်း၊ ကျွန်ုပ်သည် မိခင်ဖခင်ကျေးဇူးရှင်များအပေါ်၌လည်းကောင်း ၊ကျေးဇူး၇ှင် မိတ္တသူကြွယ်၊ဃောသကသူဌေးအပေါ်၌လည်းကောင်း၊
မဟာရာဇာနှင့်မာကဏ္ဍီ တို့ အပေါ်၌လည်းကောင်း၊အလုံးစုံသောလောကသားအားလုံးအပေါ်၌ လည်းကောင်း၊အပိုအလို အတိုးအလျော့မ၇ှိ တူမျှသောမေတ္တာကိုသာ ထားခဲ့ပါသည် ၊ဤမှန်ကန်သောသစ္စာစကားကြောင့်
အကျွန်ုပ် ၏ အတိတ်က ၀ိပါက၀ဋ်ကြွေး ပေးဆပ်ရန်မရှိပါက မဟာရာဇာခွင်းလိုက်သောမြားသည် အကျွန်ုပ်၏ နှလုံးသားကို
မျက်လုံးကို မှိတ်လျှက် လေးနက်သောစိတ်ဖြင့် မေတ္တာ အမိုးမေတ္တာတံတိုင်းများ သူမတစ်ကိုယ်လုံးကို အာရုံဖြင့်လွှမ်းခြုံလိုက်သည်။မေတ္တာအင်အားများသည် သူမ၏ တစ်ကိုယ်လုံးအား လုံးခြုံနွေးထွေးသွားစေသည့်နှယ်။
မဟာရာဇာ ၏ လေးညှို့ မှ မြားသည်လည်း အရှိန်ပြင်းစွာ လွတ်ထွက်လာပါသည်။
ထိတ်လန့် အံ့သြဖွယ်အသံများကြောင့် သူမမျက်လုံးပြန်ဖွင့် လိုက်ရာ မထင်မှတ်တဲ့မြင်ကွင်းကိုရုတ်တရက်တွေ့ လိုက်ရပါသည်။
မဟာရာဇာပစ်လွှတ်လိုက်သောမြားသည် သူမထံသို့ ရောက်မလာပဲ လမ်းတစ်ဝက်မှာပင် ပစ်သူ မဟာရာဇာ ထံပြန်လှည့်သွား
“မဟာရာဇာ ဘေးကင်းရန်ကွာ ချမ်းသာပါစေ ”
လို့ နှုတ်မှ အသံထွက်လျှက် မေတ္တာပို့ လိုက်သည့်ခဏ မဟာရာဇာ ၏ နှလုံးသားကို ဖောက်သွားအံ့ဆဲဆဲမြားတံမှာ ကြမ်းပြင်ပေါ် ဖြုတ်ကနဲပြုတ်ကျသွားခဲ့သည်။
ဒေါသမှ သောက၊ သောက မှာ နောင်တ သို့ ပြောင်းလဲသွားမဟာရာဇာ သည် မင်းအိနြေ္ဒတောင်မဆည်နိုင်ပဲ သူမထံ အပြေးလာပြီး သူမရှေ့ မှောက်မှာပင် ဒူးထောက်ကာ လက်နှစ်ဖက်ကို ရင်မှာ ယှက်လျှက် ယူကြုံးမရစွာတောင်းပန်ပါတော့သည်။
“ဖြူစင်တဲ့စိတ်ထားနဲ့ မြင့်မြတ်ဂုဏ်နဲ့ ပြည့်စုံလှတဲ့ မိဖုရားကြီး သာမာဝတီ ။မောင်တော်ဟာ သူယုတ်မာရဲ့ စကားကို နားယောင်ပြီးသူတော်ကောင်းကိုပြစ်မှားမိသူဖြစ်ခဲ့ပါပြီ။မောင်တော့်အပြစ်ကို သည်းခံခွင့်လွှတ်ပေးပါ။သက်မဲ့မြားကပင် မိဖုရားရဲ့ ဂုဏ်ကို သိပါသော်ငြား မောင်တော်မသိခဲ့ခြင်းမှာ မိုက်မဲလွန်းလှပါသည်။ယနေ့ ကစပြီး နှမတော်ဟာ မောင်တော်ရဲ့ 
သူမသည် မဟာရာဇာ ၏ ယှက်ထားသောလက်ကို ဖြေဖြူတ်ပေးပြီး ပြန်လည်ထရပ်စေသည်။
“ခွင့်လွှတ်ပါတယ်မောင်တော်..ဒါပေမယ့်နှမတော်ကို ဆရာအဖြစ်ကိုးကွယ်ဖို့ မလိုပါဘူး နှမတော်ရဲ့ နှလုံးသားမှာ မေတ္တာတရားကိန်းဝပ်စေတဲ့“ဓမ္မ” ၊ “ဓမ္မ” ရဲ့ ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ ဗုဒ္ဓကို သာ ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ပါ။မောင်တော်ကိုယ်တိုင်
စစ်မှန်တဲ့ ကောင်းကျိုးချမ်းသာ အမှန်တကယ်ခံစားရပါလိမ့်မယ်။”
သူမ၏ ခွင့်လွှတ်မှု ကိုရတော့မှ မဟာရာဇာ မျက်နှာပြန်လည် ပြုံးလာသည်။
မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ အဆင်းနှင့်အချင်း ကို မဟာရာဇာ ခွဲခြားနိုင်ခဲ့ပြီလေ၊ရုပ်ချောသလောက် အညှိုးကြီးသော မနာလိုစိတ်ကြီးသော မာကဏ္ဍီရဲ့ အတွင်းစိတ်ကို သေချာသိခွင့်ရသွားပြီးပေါ့။
မာကဏ္ဍီအားမသိမသာလှည့်ပတ်ရှာမိတော့ အခန်းထဲတွင်မတွေ့ တော့ပါ။အခြေအနေမကောင်းလို့ ပြေးပြီထင်။
“ဗုဒ္ဓကို ယုံယုံကြည်ကြည် နဲ့ ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ပါတော့မယ် နှမတော်..နှမတော်ကိုလည်း မိခင်အရာ ဆ၇ာအရာမှာ အားထားပါရစေ..မောင်တော်ကျူးလွန်မိတဲ့ အပြစ် တွေကို တောင်းပန်ချင်လို့ ဆုချီးမြှင့်တော်မူမယ်။လိုရာဆုကိုသာတောင်းပါနှမတော်..”
“ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မောင်တော်..လောကမှာ တန်ဖိုးဘယ်လောက်ရှိရှိ ကြီးမြတ်တဲ့လာဘ်ဆောင်ပစ္စည်းဖြစ်ပါစေ နှမတော် မလိုချင်ပါဘူး။
နှမတော် လိုချင်တဲ့အခွင့်အရေးလေးက ဗုဒ္ဓ နဲ့ တပည့်သံဃာတော်တွေကို ကိုးကွယ်ဆည်းကပ် လှူဒါန်းခွင့်လေးကိုပဲသနားချီးမြှင့်တော်မူပါ”
“နှမတော် အလိုဆန္ဒအတိုင်း ပြည့်ဝရပါစေ့မယ်ဗျာ..”
ထိုအချိန်မှစ၍ “ဗုဒ္ဓ ”အမှူး၇ှိသော သံဃာတော်များ အား ရွှေနန်းတော် ၀ယ် အားရပါးရ ဖူးမြော်ခွင့် တ၇ားနာခွင့် လှူဒါန်းခွင့်
ရခဲ့ပြီမို့“ကောသဗ္ဗီပြည်” တွင် ဗုဒ္ဓသာသနာ နေလို လလို ထွန်းလင်းတောက်ပခဲ့ပါသည်။
********** ****** ****** ******* ****** ******** ******** *********
“မနက်ဖြန် မောင်တော် တောကစားထွက်မယ် နှမတော်”
သူမကိုယ်တိုင် အံ့သြစိတ်နဲ့ ရုတ်တရက် ပွင့်ထွက်သွားသောနှုတ်ခမ်းကို မသိမသာပြန်စေ့ထားလိုက်သည်။
“မောင်တော့် ကိုပြောမယ်ပြုပြီးမှ ဘာလို့နှုတ်ဆိတ်သွားရတာလဲ နှမတော်..”
အကင်းပါးလှသော မဟာရာဇာ သည် သူမ၏အမူအရာကိုချက်ချင်းအကဲဖြတ်နိုင်သည်ပဲ။
“မင်းနဲ့ မိဖုရား ဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ် သာ မရှိခဲ့ရင်တော့ အကောင်းသားပေါ့ မောင်တော်..”
သူမ၏စကားကို မဟာရာဇာ ပိုစိတ်ဝင်စားလာဟန်၇ှိသည်။
“ဘုရင်မင်း မြတ်ပြုတဲ့အမှုကို အကောင်းအဆိုးဝေဖန်ခွင့် ရှိတဲ့လူသား လောက မှာ မမွေးဖွားသေးဘူးထင်ပါရဲ့ ”
“မောင်တော် ပြောထားပြီးပြီပဲ နှမတော်ဟာ မောင်တော့် အမေ မောင်တော့်ဆရာလေ၊ တိုင်းေ၇းပြည်ရာ စွတ်ဖက်ခွင့်မပြုနိုင်ပေမယ့်
မောင်တော့် ကိုတော့ ဗုဒ္ဓရဲ့ ဓမ္မ လမ်းကြောင်းပေါ်က ညွှန်ပြဆုံးမ နိုင်ပါတယ်။”
မဟာရာဇာ သည် ကြင်နာသောအပြုံးဖြင့် ခေါင်းညိတ်ပြ၏။
“စေတနာစကားမို့ အမျက်တော် အရင်မရှ ဖို့ လျှောက်ထားချင်ပါရဲ့ ”
“မောင်တော့် အကျိုးကို လိုလားတဲ့ ဇနီးအလိမ္မာ လေးဆိုတာ ယုံကြည်ပါတယ်နှမတော် လျှောက်မှာသာလျှောက်တင်စမ်းပါ”
“ဗုဒ္ဓကို ယုံကြည်မြတ်နိုးရင် ဗုဒ္ဓ ရဲ့ အဆုံးအမကိုနာခံဖို့ ဗုဒ္ဓ သတ်မှတ်ထားတဲ့ စည်းမျဉ်းဥပဒေကို လိုက်နာဖို့ လိုအပ်ပါတယ် မောင်တော်”
“ငါးပါးသီလ ကို မောင်တော် မြဲမြံအောင် ကြိုးစားဆောက်တည်ပါရဲ့ လား”
မဟာရာဇာ သူမ၏ဆိုလိုရင်းကိုသဘောပေါက်လာဟန် ပြုံးယောင်သန်းလာသည်။
“ဘာလဲ ပါဏာတိပါတာ သိက္ခာပုဒ် ကိုပြောမလို့ လား”
မေးပြီးမှ မဟာရာဇာ သဘောကျစွာရယ်လိုက်သည်။
“ဟုတ်တယ် မောင်တော် သတ္တ၀ါတွေရဲ့ အသက်ကို သတ်ဖြတ်ညှင်းဆဲခြင်းမှေ၇ှာင်ကျဉ်ရမယ်လို့ ဗုဒ္ဓဆုံးမတော်မူခဲ့တယ်မဟုတ်လား”
“ရှေးရှေးမင်းတွေ လက်ထက်ကတည်းက တောကစားထွက်တဲ့ အစဉ်အလာ၇ှိခဲ့တာပါနှမတော်”
”ရှေး ရိုးရာ အစဉ်အလာဖြစ်တိုင်း အားလုံးအမှန်ဖြစ်တာမှမဟုတ်တာပဲမောင်တော်ရဲ့ ။ ဗုဒ္ဓ ရဲ့ အဆုံးအမ စကားထက် မှန်တာ လောကမှာ ဘာမှမ၇ှိပါဘူး၊သူတစ်ပါးကိုသတ်ဖြတ်ညှင်းဆဲတာဟာ အကုသိုလ်ကံပဲ။အကုသိုလ်ပြုလုပ်ရင် တူတဲ့အကျိုးကို ခံစားရမှာပဲ၊
“ဒီလိုဆိုရင် မောင်တော်တစ်ခုမေးချင်တယ်။ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကို ရန်သူတွေ မတရားသိမ်းပိုက်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုပါတော့ အနိုင်ကျင့်သမျှ ခေါင်းငုံ့ ခံနေရမှာလား၊ ပြန်ပြီးခုခံကာကွယ်သတ်ဖြတ်လို့ မရဘူးလား၊ ကိုယ်သူ့ ကို မသတ်ရင် သူကကိုယ့်ကို သတ်ပြီး
ကိုယ့်နိုင်ငံကို သိမ်းတော့မှာမို့ ကိုယ်က လက်ဦးပြီးသတ်ရင်ရော နိုင်ငံကိုကာကွယ်ဖို့ သတ်တဲ့သူမှာ အပြစ်ရှိပါသလား”
“ဗုဒ္ဓ အလိုကျဆိုရင်တော့ သည်းခံခြင်း ဆိုတဲ့ ခန္တီတရားကိုပဲ ကျင့်သုံးကြဖို့ ဆုံးမထားပါတယ်မောင်တော်။
“သည်းမခံနိုင်တဲ့အဆုံး သည်းခံခြင်းဟာ အောင်မြင်ခြင်းမည်၏ ” တဲ့။
ဗုဒ္ဓဘုရား၇ှင် ကိုယ်တော်တိုင် အသက်အသေခံပြီး ဒုက္ခခံပြီး ခန္တီပါရမီ ကို ဘ၀ပေါင်းများစွာဖြည့်ကျက်ခဲ့ရပါတယ်။သူ့ ကိုမသတ်ရင် သူက ကိုယ့်ကိုယ်သတ်လိမ့်မယ်။ကိုယ်သေမှာကြောက်လို့ သူ့ ကိုသတ်လိုက်တယ်ဆိုပါစို့ ။သူသေမှ ကိုယ်အသက်ရှင်ခွင့် ရနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အသိဝင်လာတာနဲ့ သူ့ ကိုသေစေချင်တဲ့စေတနာပေါ်လာတယ်။သတ်လိုက်တော့ ပါဏာတိပါတာ ကံမြောက်သွားတယ်။
ကိုယ့်အသက်ကို ကာကွယ်တာဖြစ်ဖြစ် နိုင်ငံကို ကာကွယ်ဖို့ ပဲဖြစ်ဖြစ်သေစေချင်လို့ သတ်ဖြတ်တာဟာ အကုသိုလ်ကံပဲ၊
“ဓမ္မ” ရဲ့ နိယာမဟာ တစ်သမတ်တည်း ၇ှိပါတယ်။မျက်နှာမလိုက်တတ်ပါဘူး။ ရဟန်းမို့ လို့ ၊ဘုရင်မို့ လို့ ၊သူဌေးမို့ လို့ အပယ်မကျပါစေနဲ့ 
ဆင်းရဲသားမို့ လို့ ၊ဒွန်းစဏ္ဍား မို့ လို့ မကောင်းမှုလုပ်တိုင်းအပယ်ကျပါစေဆိုပြီး မျက်နှာမလိုက်တတ်ဘူးမောင်တော်။ကောင်းတာကို လုပ်တဲ့သူဟာ ကောင်းကျိုးခံစားရမှာဘဲ ၊မကောင်းတာကို လုပ်ခဲ့ရင် မကောင်းတာခံစားရမှာပဲလေ။ချိုတဲ့အသီးကို စိုက်တဲ့သူတိုင်း ချိုတဲ့အသီး စားရသလို ခါးတဲ့အသီးကို စိုက်တဲ့သူတိုင်း ခါးတဲ့အရသာ ခံစားရမယ့်သဘောပါ။
လောကရှုထောင့် ကကြည့်ရင်တော့ ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကို မတရားသိမ်းပိုက်လာရင် ခုခံတွန်းလှန်ကာကွယ်သင့်ပါတယ်။မခုခံရင် မတရား အနိုင်ကျင့်တာ စော်ကားညှင်းဆဲတာတွေ ခံချင်လဲခံရလိမ့်မယ်။ခုခံတွန်းလှန်ပြန်ရင်လဲ သူသေရင် သေ၊ မသေရင် ကိုယ်သေရမှာပဲ၊
ကိုယ်ကသူ့ ကိုသတ်လိုက်လို့ သူသေသွားရင် ကိုယ်တိုင်က အပယ်လားမယ်။မခုခံပဲ သီးခံခွင့်လွှတ်စိတ်နဲ့ ကိုယ်သေသွားရင် လူ့ ဘ၀ ကို ဆုံးရှုံးရမယ်၊ဘယ်သူပဲသေ သေ ကိုယ့်ဘက်က နစ်နာရတာချည်းပါပဲ။ဒါပေမယ့်နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းဆိုတာ ကိုယ့်အသက်ဆုံးရှုံးရမယ်။ဒါမှမဟုတ် အပယ်လားမယ် ဆိုတာ သိပါလျှက်နဲ့ မတရားမှုကိုအောင်နိုင်ရေးအတွက် ပြည်သူတွေအတွက် ကိုယ်ကျိုးစွန့် အနစ်နာခံ ဆောင်ရွက်ကြတာပဲ၊
ဘာလို့ လဲဆိုတော့ အနစ်နာခံခြင်းနဲ့ သူတစ်ပါး အကျိုးဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုတဲ့ လူ့ တာဝန်ကို ကျေပွန်ရမှာပါပဲ”
မဟာရာဇာထံမှာ ကြားရသော ဤစကားမျှသည်ပင် စမ်းကျရေစီးသံနှယ် သူမ နှလုံးစိတ်ဝမ်းငြိမ်းချမ်းလှပါ၏။
“ဒါဆို နိုင်ငံတော်ကို တာဝန်ယူစောင့်ရှောက်နေရတဲ့ ဘုရင်တွေ တာဝန်၇ှိသူတွေအတွက် အကုသုလ်မဖြစ်အောင် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်တဲ့နည်းလေး ဗုဒ္ဓက ညွှန်ပြထားတာရှိလား နှ မတော်..”
လိုလိုလားလားနဲ့ မေးလာတော့ သူမမှာ ဆက်ပြောပြဖို့ ပိုမိုအား၇ှိသွားလေသည်။
ဗုဒ္ဓက တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ မင်းတွေ စောင့်ထိန်းကျင့်ကြံဖို့ မင်းကျင့်တရား ဆယ်ပါး ချမှတ်ပေးထားပါတယ်မောင်တော်၊
“(၁) အလှူပေးခြင်း (၂) ငါးပါးသီလ ပြည့်စုံခြင်း (၃) အမှုထမ်းများအား လုံလောက်သောရိက္ခာပေးဝေခြင်း
(၄) ရိုးသားဖြောင့်မတ်ခြင်း (၅) သိမ်မွေ့ နူးညံ့စွာပြောဆိုကျင့်ကြံခြင်း (၆)အကျင့်သီလကို ခြိုးခြံစွာစောင့်ထိန်းခြင်း
(၇) အမျက်မထွက်ခြင်း (၈) မနှိပ်စက် မညှင်းပန်းခြင်း (၉) သည်းခံခြင်း (၁၀)ပြည်သူတို့ နှင့်မဆန့် ကျင်ခြင်း ...။
ဆိုတဲ့ (၁၀) ချက်ကိုသာ နိုင်ငံတိုင်း ကိုအုပ်စိုးတဲ့ ဘုရင်တွေ လိုက်နာကျင့်သုံးရင် တစ်နိုင်ငံနဲ့ တစ်နိုင်ငံ မတရားသိမ်းပိုက်ကျူးကျော်တာတွေ အချင်းချင်းသတ်ဖြတ်ညှင်းဆဲတာတွေ ရှိမှာမဟုတ်ဘူး။
မင်းနဲ့ ပြည်သူအားလုံး ငါးပါးသီလနဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားသာ စောင့်ထိန်းကြမယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီနိုင်ငံဟာ အငြိမ်းချမ်းဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးနိုင်ငံဖြစ်လာမှာပါပဲ။
အရေးကြီးဆုံးက ကိုယ်ကျင့်သီလနဲ့ လူလူချင်းကိုယ်ချင်းစာစိတ်လေးပါပဲမောင်တော်”
မဟာရာဇာ ခေါင်းကိုဆတ်ခနဲညိတ်လိုက်၏။ သူမပြောသည်များကို လက်ခံသဘောကျကြောင်းသိရတော့ အတိုင်းမသိ ပီတိဖြစ်ရပြန်ပါသည်။
“မင်းကျင့်တရားဆယ်ပါးနှင့်အညီ ပြည့်စုံအောင် အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပါ့မယ် နှမတော်”
သူမသည် လောက၌ အချိုမြိန်ဆုံးသော စကားကိုကြားလိုက်ရသလို ရင်ဝယ်ပီတိ ဖြစ်ရပါသည်။
သလွန်ပေါ်ထိုင်နေရာမှ ဖြည်းညင်းစွာထ လိုက်ပြီး တစ်လှမ်းချင်းထွက်သွားသော မဟာရာဇာ ၏ ကျောပြင်ကို ကြည့်ရင်း
ပီတိသောမနဿ စိတ်များဖြာဝေလျှက် ကျန်ခဲ့၏။
တံခါးဝအရောက်တွင် မဟာရာဇာ သမင်လည်ပြန်လှည့်ပြောခဲ့သည့်စကားက...
“သြော်....နှမတော် မနက်ဖြန်မောင်တော် တောကို အလည်သက်သက်ပဲ သွားတော့မယ်နော်..”
ဤ တစ်ကြိမ်မှာတော့ သူမ၏အပြုံးတစ်ချက်တွင် ဖွေးလက်သွားတန်းလေးများပင်ပေါ်လွင်သွားရပါသည်။
သူမ၏ အခန်းတွက်းသို့သုဇာ ခပ်သုတ်သုတ်ဝင်လာသည်။
“ဘယ်လိုဖြစ်လာရပြန်တာလဲ သုဇာ ”
မောနေသဖြင့် သူမမေးခွန်းကိုပင် ချက်ခြင်းပြန်မဖြေန်ုင်။
“သုဇာကိုရေတစ်ခွက်တိုက်လိုက်ဦး မုဒြာ ဒီကလေးမ ဘာဖြစ်လာတာလဲမသိဘူး”
ဒေါ်ခုဇ္ဇုတ္တရာ ခိုင်းလိုက်သဖြင့် မုဒြာရေတစ်ခွက်ငှဲ့ လာ၏။ မုဒြာယူလာသောရေကို မနားတမ်းမော့သောက်ပြီးနောက် ဟူးခနဲလေမှုတ်ထုတ်လိုက်၏
“ကဲ..ရွှေသုဇာ ဘာဖြစ်လာတာလဲဆိုတာ ပြောပြပါဦး”
“ကျွန်မတို့ အဆောင်အောက်ခြေကအစ ရေနံချေးတွေ လာသုတ်နေတယ်သခင်မလေး။တိုင်တွေဆိုလည်းရေနံကြီးရွှဲရွှဲ စိုနေတဲ့အ၀တ်နဲ့ 
လိုက်ပတ်နေနေကြတယ်။ကျွန်မက ဘာလို့ လာသုတ်ပေးတာလဲလို့ မေးတော့ -အဆောင်ခိုင်ခံ့အောင် မဟာရာဇာက ရေနံချေးတွေသုတ်ခိုင်းလို့ တဲ့။ဘယ်သူ့ အမိန့် လဲဆိုတော့ မဟာရာဇာ အမိန့် လို့ ပြောတာပဲ”
သူမလဲလျောင်းနေရာမှ ထလိုက်သည်။သုဇာခေါင်းကို ချစ်စနိုးပုတ်ပြီး ..
“မဟာရာဇာ တောမသွားခင် အမိန့် ပေးခဲ့တာနေမှာပေါ့ သုဇာလေးရဲ့ ၊ဘာများစိုးရိမ်စရာရှိလို့ လဲ”
“သခင်မလေးက ဘာမှမသိဘဲနဲ့ ..”
“မသိရင် သိတဲ့ သုဇာက ပြောပြပေါ့ ”
“အဲ့ဒီရေနံချေးတွေ လာသုတ်တဲ့ သူတွေက မဟာရာဇာ ရဲ့ မင်းချင်းတွေမဟုတ်ဘူး သခင်မလေးရဲ့ ..၊မာကဏ္ဍီ ရဲ့ ဘထွေးနဲ့ သူ့ လူတွေ”
“သုဇာနဲ့ မုဒြာ သွားတော့ သူတို့ လူတွေရဲ့ လှုပ်၇ှားမှုတွေကို သတိကြီးကြီးထားပြီးအကဲခတ်နေကြ၊အကြောင်းထူးရင် အမြန်ဆုံးသတင်းလာပို့ကြားလား”
ဒေါ်ခုဇ္ဇုတ္တရာ ကခိုင်းလိုက်သဖြင့် နှစ်ဦးလုံးခပ်သုတ်သုတ်လေး ထွက်သွားကြသည်။
သူမက ဒေါ်ခုဇ္ဇုတ္တရာ အားလှမ်းကြည့်ပြီး ခပ်ပြုံးပြုံးလေးမေးလိုက်သည်။
“မာကဏ္ဍီ ကိုလျှော့ မတွက်နဲ့ သခင်မလေး၊ကမ်းကုန်အောင်ယုတ်မာမယ့်မိန်းမ ၊ရုပ်ကလေးနဲ့ မတန်အောင်စိတ်ပုတ်တဲ့မိန်းမ
အရင်တစ်ခါကြည့်ပါလား၊ မဟာရာဇာ နဲ့ လိုက်လာပြီး လူတွေေ၇ှ့ မှာ မြွေနဲ့ တိုက်သတ်တာ ကံကောင်းလို့ ၊မဟာရာဇာ နတ်ရွာမစံ-သခင်မလေး လဲမဟာရာဇာပစ်တဲ့မြားနဲ့ အသက်မထွက်တာမဟုတ်လား၊ကျွန်မတို့ သုဇာတို့ အကွယ်ကနေသေချာမြင်တယ်၊
လူအလစ်မှာ စောင်းပေါက်က ပန်းတွေ သူဆွဲဖြုတ်လိုက်တာနဲ့ တင် မြွေထွက်လာတာ၊ သူ့ လက်ချက်အစစ်ပဲ၊သခင်မလေးကိုယ်တိုင်လုပ်ကြံတဲ့ အနေမျိုးရောက်အောင် ပုံမှားရိုက်လိုက်တာ”
ဒေါ်ခုဇ္ဇုတ္တရာ အား သူမ ကြင်နာစွာပြုံးပြလိုက်သည်၊သူမအပေါ်၌ တာဝန်အရ ရော မေတ္တာစေတနာပါ အပြည့်အ၀ထား၇ှာသည်။
“အကြောင်း ကြောင့် အကျိုး ဖြစ်လာရတဲ့ ပဋိစ္စသမုပ္ပာဒ် တရားကိုအမေသိသားပဲလေ၊“မာကဏ္ဍီ ” ကိုမမုန်းပါနဲ့ အပြစ်လဲမတင်ပါနဲ့ တော့
“မာကဏ္ဍီ ”အဆိုးကြံသမျှ သခင်မလေးရဲ့ အတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့ အရိပ်ကံပဲမဟုတ်လား၊အကောင်းအဆိုးမှန်သမျှ အကြောင်းအကျိုးကံက ဖြစ်လာတာပဲလေ။၀ဋ်ကြွေးဆိုတာ လွှဲရှောင်တားဆီးလို့ ရတဲ့ အရာမျိုးမှမဟုတ်ပဲ။”
လောကလူသားတိုင်း အချင်းချင်းကြင်နာသနားပြီး တစ်ဦးကိုတစ်ဦးမေတ္တာထားကြလျှင် အားလုံးငြိမ်းချမ်းသာယာနေကြမည်သာဖြစ်၏။
တစ်ဦးကိုတစ်ဦး အသက်သေအောင်မဆိုထားဘိ ၊ထိခိုက်နစ်နာအောင်ပင် ရက်စက်ဖွယ်မ၇ှိနိုင်ပေ။
မေတ္တာသည် စမ်းရေ ပမာအေးမြလှသည်။
ဒေါသအုပ်စု၏ နောက်လိုက်များမှာ မနာလိုမှုက္ကူဿာ၊၀န်တိုမှု မစ္စရိယ၊ နောင်တတဖန် ပူပန်မှု ကုက္ကုစ္စ၊ဤကဲ့သို့ အကုသိုလ်တရားများ
ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခွင်ကို ငေးမျှော်ကြည့်ရင်းအတွေးမဆုံးမီ လေသာပြတင်းမှခွာလျှက် ဘုရားခန်းထဲသို့ ဝင်လာခဲ့၏။၀ိပဿနာ ဘာဝနာကမ္မဌာန်း စီးဖြန်းရန်အချိန်ကျရောက်နေပြီ။သူမ၏ရံရွေတော်များအားလုံး ဘုရားခန်းတွင်ကိုယ်စီကိုယ်ငှ
“ကဲ..အားလုံးပဲ ၀ိပဿနာ တရားအားမထုတ်ခင် မေတ္တာဘာဝနာပွားရမယ်။အားလုံးညီညီညာညာနဲ့ မေတ္တာ ပို့ ကြရအောင်”
အားလုံး၏ေ၇ှ့ ဆုံးတွင် ၀င်ထိုင်လိုက်ပြီး နိစ္စဓူဝ ပြုနေကြအတိုင်း သတိပေးနှိုးဆော်လိုက်သည်။ အနှောင့်အယှက်ကင်းစွာတရားအားထုတ်နိုင်ရန် တံခါးများအားလုံးကိုလည်းသေချာပိတ်ထားပြီးလေပြီ။
“အနန္တ စကြ၀ဠာ ....အနန္တသတ္တ၀ါ တို့ ...
သာယာနာပျော်ဖွယ် ညီညာဖျဖျ သုံးကြိမ်ရွတ်ဆိုပြီး နောက်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သွားကြ၏။မေတ္တာကမ္မဌာန်း ကိုစတင်စီးဖြန်းကြသည်။
အတန်ငယ်ကြာသောအခါ သူမနောက်မှာ ထိုင်နေကြသည့် ရံရွေတော်များမှာ ချောင်းဆိုးသံများ ဆက်ကာဆက်ကာ ထွက်ပေါ်လာကြသည်။ပြီးတော့ ဟတ်ချိုးချေသံများ။
သူမကိုယ်တိုင်လည်း မီးခိုးနံ့ များဖြင့် မွန်းကျပ်နေ၏ သို့ ရာတွင်မျက်လုံးကိုမဖွင့် မေတ္တာကမ္မဌာန်း ကိုသာ သတိမပြတ်ပွားနေ၏။
သုဇာ ၏ အထိတ်တလန့် စူးရှကျယ်လောင်သောအသံ ထွက်ပေါ်လာ၏ သူမ တုတ်တုတ် မျှမလှုပ်မိ ကမ္မဌာန်းကိုအမှတ်မလွတ်အောင်ပွားများနေမိသည်။
“မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်ပါဦး သခင်မလေးရဲ့ ကျွန်မ တို့ အဆောင် မီးလောင်နေပြီ..။”
ငိုသံပါကြီးဖြင့် အော်လိုက်သော သုဇာ ကြောင့်သူမ ရင်တွင်း၌ သနားဂရုဏာ သက်သွားသည်။မိမိကို မှီခိုအားထားနေသော မိန်းကလေးများ
ကိုသတိရကာ မျက်လုံးကိုအသာဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ ဘုရားခန်းဆီ သို့ ပင် မီး ကူးစပြုနေပြီ။
သြော်...မာကဏ္ဍီ..မာကဏ္ဍီ...ဟုသာ ရင်တွင်းမှ ရေရွတ်ရင်း ၀ဋ်ကြွေးရှိက ဒီဘ၀ ဒီမျှ နဲ့ သာ ပြေပါစေတော့..
မာကဏ္ဍီရယ်ဟု မေတ္တာ ရှေးရှု ပို့ လွှတ်လိုက်ပါ၏။
ရံရွေတော်များမှာ ကြောက်ရွံ့ စိတ်များဖြင့် ထပြေးအံ့ဆဲဆဲ ကုန်းကုန်းကွကွ ဖြစ်နေကြသည်။သူမမှာသာ အေးစက်စက်ဖြင့်ဘာမှလှုပ်ရှားမှု
မရှိ ပကတိတည်တည်ငြိမ်ငြိမ် ဖြစ်နေသည်မို့ သူမအား အားမလိုအားမရဖြစ်ကာ ရှေ့ ဆက်ဘာလုပ်ရမှန်မသိဘဲ ငိုယိုနေကြပြီ။
မီးတောက်မီးလျှံများမှာ သူမတို့ အခန်းပတ်လည်ကို ၀ိုင်း၍ ဟုန်းဟုန်းတောက်လောင်နေပေပြီ ပြေး၍ လွတ်ဖွယ်လမ်းမမြင်တော့။
“ညီမတို့ ...အတိတ်က ပြုခဲ့တဲ့ အကုသိုလ်ဝဋ်ကြွေး ရှိခဲ့ရင် ပြေးလို့ မလွတ်ပါဘူး။ပေးဆပ်ရုံသာ ၇ှိပါတယ်။အတိတ်ဘ၀ က သခင်မတို့ မသိစိတ် သိစိတ်နဲ့ ပြုလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့ ကံဆိုးကံမိုက်တွေကြောင့် ခုလိုခံရတာပဲ။မီးဘေးကလွတ်အောင် မပြေးနိုင်မယ့်အတူတူ
သွေးရူးသွေးတန်းနဲ့ သေမယ့်အစား ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်ကို နှလုံးသွင်းကြပါတော့ .ဝေဒနာနုပဿနာကမဌာန်း ကို စီးဖြန်းကြပါတော့...”
သူမကိုယ်တိုင်လည်း နေရာတကျ ပြန်ထိုင်ကာ မလှုပ်မယှက် ကမဌာန်းတရားများ ပွားများအားထုတ်လေ၏။
မီးတောက်မီးလျှံများကား တဖြေးဖြေးပြင်းထန်လာပြီး မကြာမီ သူမတို့ နှင့် တကွ ဘုရားခန်းတစ်ခုလုံး ကို ၀ါးမျိုသွားပါတော့၏။
ရွှေထီး၊ရွှေနန်း၊ဖြင့် စံမြန်းရစေကာမူ ဘ၀တစ်သက်တာ ဆိုသည်မှာ လျှပ်တစ်ပြက်သာ၇ှိချေ၏။ ခမ်းနားလှသော အဆောင်အယောင်နှင့်
“မာကဏ္ဍီ” အပေါ်၌ မေတ္တာ တရားကြီးစွာ ခွင့်လွှတ်နိုင်စွမ်း၇ှိသော သာမာဝတီမိဖုရားကြီးအား ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည် အသာဆုံးအမြတ်ဆုံးမေတ္တာရှင်(မေတ္တာဝိဟာရီ)ဧတဒဂ်ဘွဲ့ ကိုသနားချီးမြှင့်တော်မူခဲ့ပါသည်။
ဥတေနမင်း ပစ်ခွင်းလိုက်သောမြားကိုပင် ဦးတည်ရာသို့ ပြန်လှည့်စေနိုင်သော သူမ၏ မေတ္တာ၊သစ္စာ စွမ်းအားသည် မီးတောက်မီးလျှံများကို ငြိမ်းသွားစေခြင်းငှာ မစွမ်းနိုင်ပါသလောဟု စောဒက တက်ဖွယ်ရှိပါ၏။
“မေတ္တာ၊သစ္စာ၊အဓိဌာန်၊” ဤ သုံးချက်ကို အလုံးစုံသော ဘေးအပေါင်း ရန်အပေါင်းမှလွတ်မြောက်အောင်ကာကွယ်နိုင်သည်မှာ အမှန်ဖြစ်ပါသည်။သက်သေသာဓက များစွာလည်းရှိခဲ့ပါသည်။သို့ ရာတွင် အကုသိုလ်ကံ ၀ိပါက်ဝဋ်ကြွေး များ၇ှိခဲ့လျှင်တော့ ထပ်တူထပ်မျှ ပေးဆပ်ရန်သာ၇ှိပါ၏။“ကိုယ်ပြုတဲ့ကံ ပဲ့တင်သံ ကိုယ့်ထံ ပြန်လာမည် ”..ကိုယ်တိုက်က စိုက်ပျိုးခဲ့မိတဲ့ အကုသိုလ်မျိုးစေ့ကို ကိုယ်တိုင်ပဲအကျိုးပြန်ခံစားရမှာ သဘာဝပါ။
ဗုဒ္ဓကိုယ်တိုင် ပါရမီနုစဉ်အခါက မသိမှုဖြင့်ကျုးလွန်ခဲ့မိသော ၀ိပါက်တော် (၁၂) ပါးကို ခံစားခဲ့ရပါ၏။
သာမာဝတီမိဖုရားကြီး အပါအ၀င် ရံရွေတော်များသည်.တစ်ခုသောဘ၀က နန်းတွင်းသူများဖြစ်ခဲ့ပါသည်။သူမနှင့်အပေါင်းအဖော်များ မြစ်ဆိပ်သို့့ရေကစားဆင်းခဲ့သည်။ရေကစားပြီးပြန်တက်လာသောအခါ ချမ်းအေးသဖြင့်မြက်ချုံကိုမီးရှို့ ၍ မီးလှုံ ကြ၏ ။ထိုမြက်ချုံ၌ ဘုရင်မင်းမြတ်ကိုးကွယ်နေသော ပစ္စေကဗုဒ္ဓါ တစ်ပါး နိရောဓသမာပတ် ၀င်စားလျှက်သားတွေ့ ရသောကြောင့် ရာဇဒဏ်သင့်မည်စိုး၍ ကြံရာမရဖြစ်ကာ ထင်းတုံးထင်းစများ၇ှာပြီး ပစ္စေကဗုဒ္ဓါ အားပြာကျသွားအောင် မီးရှို့ သတ်ခဲ့ကြပါသည်။
နိရောဓသမာပတ် ၀င်စားနေသော ပုဂ္ဂိုလ်အား အသက်အန္တရာယ်ပြု၍ မရသော်လည်း သေစေချင်သည့်စိတ်စေတနာနဲ့ မီးရှို့ သတ်ခဲ့မိသော
အကုသိုလ်ကြောင့်ငရဲ၌ အနှစ်တစ်သိန်းခံရပြီး ဘ၀တစ်ရာပတ်လုံး မီးလောင်ကျွမ်းကာသေဆုံးကြရရှာပါသည်။
ယခုနောက်ဆုံးဘ၀တွင်လည်း (သောတပန် အရိယာပုဂ္ဂိုလ် ) ဖြစ်လင့်ကစား အကုသိုလ်အကြွင်းအကျန်အား ပေးဆပ်ခဲ့ရပြန်ပါသည်။
အကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးတဲ့ ၀ဋ်ကြွေးကား ဓမ္မသံဝေဂယူဖွယ် ကြောက်မက်ဖွယ် ကောင်းလှပါဘိ။
“ကုသိုလ်ကံမှ လွှဲရှောင်ဖယ်ခွာလျှက် ပါပညစ်ကျု မကောင်းမှုကိုသာ စီမံပြုလုပ် အားထုတ်နေကြသည့် သတ္တ၀ါတို့ သည် သံသရာဝဋ်ဆင်းရဲ၌ အမြဲမပြတ်အထပ်ထပ်ပြေးလွှားကာ ချမ်းသာနှင့်ဆင်းရဲ ကိုသော်မှ ပေါ်ချည်နှစ်ချည်ခံစားကြရကုန်၏”
ဟု မြတ်ဘုရားမိန့် တော်မူခဲ့ပါသည်။
ဒီပိုစ့်လေးနဲ့(မကျည်းတန်ရဲ့ ကမ္မဖလ ) ပိုစ့်လေးက တစ်ဆက်တည်းပါ၊အဲ့ဒီဇာတ်လမ်းထဲက ခုဇ္ဇုတ္တရာဟာ အခုဒီပိုစ့်က
သာမာဝတီမိဖုရားကြီးရဲ့ အထိန်းတော်ပါပဲ။လူ့ ဘ၀ကို ရလာခြင်းအတူတူ တစ်ယောက်က ရုပ်ဆိုးတဲ့ကျွန် တစ်ယောက်က လှပတဲ့ ဘုရင့်မိဖုရား သေတော့လဲ မီးလောင်ကျွမ်းပြီးအတူတူသေရရှာတယ်။
သူတို့ နှစ်ဦးရဲ့ ဘ၀ကံအကျိုးပေးမတူပေမယ့် ဧတဒဂ်ဘွဲ့ ကို တော့နှစ်ဦးစလုံးရခဲ့ပါတယ်။
ခုဇ္ဇုတ္တရာ က (အကြားအမြင် အသာဆုံးအမြတ်ဆုံး ဗဟုသုတဘွဲ့ ) သမာဝတီမိဖုရားကြီးက (မေတ္တာဝိဟာရီဘွဲ့ ) ရခဲ့ကြပါတယ်။
မလေးငြိမ် ရဲ့ (အဆင့်မြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အမျိုးသမီးများ) စာအုပ်လေးကလွန်ခဲ့တဲ့ (၈) နှစ်လောက်က မွေးနေ့ လက်ဆောင်အဖြစ် ရထားတဲ့စာအုပ်လေးပါ။လက်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့သူငယ်ချင်းက သူတို့ ဆေးခန်းက နာစ့်မလေးတစ်ယောက် က ဒီစာအုပ်လေးပေးဖတ်တယ်။အရမ်းကောင်းလို့ ဆိုပြီး မွေးနေ့ လက်ဆောင်အဖြစ်ဝယ်ပေးခဲ့ပါတယ်။စာအုပ်လေးကို ဖတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာ အရာရာကိုလဲလေးလေးနက်နက်တွေးတတ်လာတယ်။ကိုယ်တိုင်က အရိယာနွယ်ဝင် သူတော်စင် မဟုတ်လို့ အဆင့်မြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အမျိုးသမီး ဆယ်ယောက်လို
မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထားနဲ့ မြင့်မြတ်တဲ့ သူမဖြစ်ရင်တောင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို မိန်းမကောင်းတစ်ယောက် တန်ဖိုး၇ှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်ခဲ့တယ်။ကိုယ့်ဘ၀ကိုလည်းတန်ဖိုးထားတတ်လာတယ်။.
မလေးငြိမ် ရဲ့ စာအုပ်လေးဖတ်ပြီး ရလိုက်တဲ့ သင်ခန်းစာလေးကိုပြောပြချင်ပါတယ်။
လူတစ်ကိုယ်စိတ်တစ်မျိုး၊ခံယူချက်အမျိုးအမျိုး မို့တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်အတွေးအခေါ်အယူအဆတွေ တူချင်မှလဲတူလိမ့်မယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မြန်မာလူမျိုးတော်တော်များများက အမျိုးပျောက်မှာ၊သာသနာကွယ်မှာကြောက်ကြပါတယ်။
လူမျိုးခြား၊ဘာသာခြားကို ချစ်ကြိုက်မိလို့ ယူလိုက်တဲ့သူတွေကို အမျိုးဖျက်၊သာသနာဖျက်ဆိုပြီး ၊အပြစ်တင်ကြတယ်နော်။
လူမျိုးအချင်းချင်းယူ၊ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အချင်းချင်းယူပြီး၊စိတ်ဓါတ်ရေးရာနိမ့်ကျတဲ့သူတွေ၊ဗုဒ္ဓသာသနာ ကိုညှိးအောင်လုပ်တဲ့သူတွေ အများကြီးပါပဲ၊။
ဘာသာခြားကိုယူပြီး ဘာသာပြောင်းသွားတဲ့ လူဦးရေထက် ။ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မြန်မာလူမျိုးဖြစ်ပြီး အမျိုး၊ဘာသာ၊သာသနာကို တန်ဖိုးမထားတဲ့သူတွေ ဂါရ၀တရား မရှိတဲ့သူတွေ တော်တော်များပါတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ဘုရားအဆုံးအမ နဲ့ မနေတဲ့သူလဲတွေ အများကြီးပါပဲ။
အခုခေတ်မှာ...ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မိန်းကလေးတော်တော်များများက ဘ၀ကိုတန်ဖိုးမထားကြတော့ဘူး။အားလုံးကိုမဆိုလိုဘူးနော်..တော်တော်များများတွေ့ နေရတာကိုပြောတာပါ။ခေတ်မှီလာတာလား၊ခေတ်ကြီးက ပျက်လာတာလားတော့မသိဘူး။ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ရည်းစားထားကြတယ်။“ဟီရိသြတပ္ပ” ဆိုတဲ့ မိမိကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားပြီး မကောင်းမှု အကုသိုလ်မှရှောင်ကျဉ်ရမယ်ဆိုတဲ့
အရှက်တရားလည်းနည်းလာတယ်။အရက်၊ ဘီယာလဲသောက်တတ်လာကြတယ်၊။.ရည်းစားဘ၀မှာလဲ စောင့်ထိန်းရမယ့်စည်းကမ်းမရှိကြတော့ဘူး၊တိုက်နဲ့ ကားနဲ့ သာနေရမယ်ဆိုရင် မယားရှိတဲ့လင်လည်းမရှောင်တော့ဘူး၊။အဖေအ၇ွယ် အဘအ၇ွယ်လဲ အငယ်လေးအမည်ခံပြီးယူကြတာပဲ။ ကိုယ့်ကိုယ်လည်းတန်ဖိုးမထားကြတော့ဘူး။
..တန်ခိုးကြီး ဘုရားတော်တော်များများမှာ ကပ်ထားတဲ့ စာတွေကိုဖတ်ကြည့်ပါ၊။
“စုံတွဲများ ဘုရားပေါ်တွင် မသင့်မလျော် မနေရ” တဲ့ သေချာစဉ်းစားကြည့်ရင် . တော်တော်ရှက်စရာကောင်းပါတယ်။
ဒီလိုသတိပေးတဲ့စာတွေဆိုတာ မရှိသင့်ဘူး၊ကိုယ့်ဘာသာကိုလေးစားရင် ဘာသာရေးအသိနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းစည်းကမ်း ၇ှိသင့်ပါတယ်၊။စည်းကမ်းသည်လည်းဘာသာရဲ့ တန်ဖိုးကို ဆောင်ပါတယ်၊။ဘုရားစေတီဆိုတာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အတွက် အမြင့်မြတ်ဆုံး ဂါရ၀ ပြုတဲ့နေရာပါ။
ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုတခြားဘာသာဝင်တွေ အထင်မသေးအောင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်း ဂါရ၀ တရား နဲ့ နေသင့်ပါတယ်၊။
ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ အိမ်ထောင်ပြုကြတယ်၊ပြီးတော့ အိမ်ထောင်ရှင် မိန်းမပီသအောင်လဲ မနေကြတော့ဘူး၊
မယားဝတ္တရားငါးပါးလဲ မစောင့်ထိန်းကြတော့ဘူး၊သားသမီးတွေရလာတော့လည်းမှန်ကန်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့ မဆုံးမနိုင်ကြပြန်ဘူး။ဘ၀ဆိုတာ ကို လင်ယူသားမွေး ဖို့ စီးပွါးရှာဖို့ ယောင်္ကျားလုပ်စာထိုင်စားဖို့ နဲ့ ရွှေတွဲလဲ၊ငွေတွဲလဲ နေရရင်ပဲ လူဖြစ်ရကျိုးနပ်ပြီလို့ ထင်နေကြပါတယ်။
ကိုယ်ချမ်းသာဖို့ကိုယ့်ခင်ပွန်း ကို မတရားလောဘနဲ့ စီးပွါးရှာခိုင်းကြတာများတယ်။
ပတ်ဝန်းကျင်မှာ တွေ့ မြင်နေရတဲ့ အိမ်ထောင်သည်ဘ၀ သုံးမျိုးရှိပါတယ်။
(၂)သာမန် အိမ်ထောင်သည် ဘ၀
(၁) အပေါစား အိမ်ထောင်သည်ဘ၀..ဆိုတာက.အိမ်ထောင်သည်ဘ၀ ရောက်ပေမယ့် ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဖက်အပေါ် တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦးတန်ဖိုးမထားတဲ့သူတွေ၊တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦးမလေးစားပဲ ဆဲဆိုရိုက်နှက်
မယားဝတ္တရား(၅)ပါး၊လင့်ဝတ္တရား(၅)ပါး နဲ့ အိမ်ထောင့်တာဝန်မကျေတဲ့သူတွေ။ဘာသာတရားအဆုံးအမနဲ့ လဲမနေဘဲ
ယောကျာင်္းက အရက်သောက်ဖဲရိုက်၊ မိန်းမလိုက်စား၊အိမ်ကမိန်းမကလဲစီးပွါးရေးအဆင်မပြေတာအကြောင်းပြပြီးလင်ငယ်နေ.သားသမီးတွေကိုလဲ လူတန်းစေ့မထားနိုင်၊ဘာသာတရားအသိနဲ့ လဲမဆုံးမနိုင်ပဲ အိမ်ထောင်တစ်ခုကို ဖြစ်သလို တည်ဆောက်ပြီး ဘ၀ကိုတန်ဖိုးမထားပဲ ပေါ့ပျက်ပျက်နေကြတဲ့သူတွေ ဟာ “အပေါစားအိမ်ထောင်သည်ဘ၀”ပါ။
(၂)သာမန်အိမ်ထောင်သည်ဘ၀..ဆိုတာက တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦးချစ်လိုယူခဲ့ကြပါတယ်၊ဒါပေမယ့်
ကြီးပွါးချမ်းသာဖို့ အတွက် မတရားတဲ့နည်းနဲ့ ၊အကုသိုလ်အလုပ်နဲ့ စီးပွါးရှာတာကိုတစ်ဦးကိုတစ်ဦးမတားပဲအားပေးတဲ့သူတွေ။ကုသိုလ်ေ၇းတွေမလုပ်ပဲ ဥစ္စာမာန်၊ဓနမာန်တက်နေတဲ့ သူတွေ၊စီးပွါးရေးအဆင်ပြေလို့။ရွှေတွဲလွဲ၊ငွေတွဲလဲနေရရင်ပဲ စိတ်ချမ်းသာမှုအစစ်လို့ ထင်နေတဲ့သူတွေပါ။
ဒီခေတ်မှာ စီးပွါးရေးအဆင်ပြေလာတဲ့ အသက် ၄၀၊၅၀
အရွယ်အိမ်ထောင်ရှင် ယောင်္ကျားတော်တော်များများ ဟာ အရက်၊ဖဲ၊မိန်းမ ကိစ္စတွေ ရှုပ်လာတယ်။အရက်မသောက်တတ်၊ဖဲမရိုက်တတ်၊မိန်းမ မလိုက်စားဘဲ၊ရတနာသုံးပါးရိုသေပြီး အိမ်ထာင်ရေးကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ယောက်ျား ဆိုတာတော်တော်ရှားတယ်၊စီးပွါးရေးအဆင်ပြေလို့ သာယာချမ်းမြေ့ တဲ့ မိသားစု ဘ၀ကို
ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတဲ့မိန်းကလေးတွေလဲတော်တော်နည်းပါတယ်။အသက်၄၀၊ ၅၀ အရွယ်မယား၇ှိနေတဲ့ ဆိုက်ကားသမားရဲ့ မယားငယ်လုပ်ချင်တဲ့တဲ့သူတွေမရှိပေမယ့်၊။အသက် ၄၀၊၅၀ အဖေအရွယ် ကုမ္မဏီပိုင်ရှင်သူဌေး ကြီးတွေမှာတော့ နံပါတ်စဉ်တွေများလိုက်တာ။
သားသမီးတွေကလဲ မိဘက ချမ်းသာတော့ လိုချင်တာကိုရနေပြီး ဘ၀ကိုတန်ဖိုးမထားတတ်ကြတော့ဘူး။အပြင်ပန်းကကြည့်ရင်တော့
တိုက်နဲ့ ၊ကားနဲ့ ကုမ္မဏီကြီးတွေနဲ့ ပေါ့။တစ်ကယ့် အတွင်းမှာတော့ သစ္စာတရား၊တွေနားလည်မှုတွေ ကိုယ်ချင်းစာမှုတွေ နွေးထွေးမှုတွေ
ကင်းမဲ့နေတဲ့ အနှစ်ကင်းမဲ့တဲ့အကာသက်သက်အိမ်ထောင်ရေးပါ။ ဒါဟာ “သာမန်အိမ်ထောင်သည်ဘ၀”..ပါ။
(၃)“စံပြုထိုက်တဲ့အိမ်ထောင်သည် ဘ၀ဆိုတာက.” ချစ်လို့ လက်ထပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊မိဘသဘောတူလို့ လက်ထပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ဖြစ် သာမာဝတီမိဖုရား ကြီးလို ကိုယ့်ခင်ပွန်း၊ဒါမှမဟုတ် ဇနီးကို မှန်ကန်တဲ့အတွေးအခေါ်တွေ။
ဘာသာရေးအသိတွေနဲ့ လမ်းညွှန်ပေးနိုင်တဲ့ ဇနီးကောင်း၊ခင်ပွန်းကောင်း၊ကိုယ်တိုင်ကလဲ ဘာသာတရားကိုလေးစားတယ်၊ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တန်ဖိုးထားပြီး လူကောင်းဖြစ်အောင် နေတယ်၊၊၇တနာသုံးပါးနဲ့ ငါးပါးသီလကို ကြိုးစားဆောက်တည်ပြီး စီးပွါးကိုလည်း သမာအာဇီဝနည်းနဲ့ ၇ှာတယ်၊တိုက်နဲ့ ကားနဲ့ စည်းစိမ်ပေါ်မှာ မနေရပေမယ့်၊ မချမ်းသာပေမယ့် ရိုးရိုးသားသားနဲ့ အလုပ်ကြိုးစားတယ်။မယားဝတ္တရား(၅)ပါး
လင့်ဝတ္တရား(၅)ပါးနဲ့ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး နားလည်မှု.၊စာနာမှု၊ သီးခံမှု၊တွေနဲ့နေကြတယ်။၊ဒါန၊သီလ၊ဘာဝနာ ကုသိုလ်ကိုလည်း မောင်တစ်ထမ်းမယ်တစ်ရွက်နဲ့ကြိုးစားလုပ်တယ်၊။သားသမီးတွေကိုလည်း ဘာသာရေးအသိတွေနဲ့ လိမ္မာယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမနိုင်တယ်၊မိဘကိုယ်တိုင်လည်း သားသမီးအတွက် လေးစားအထင်ကြီးအောင်ကိုယ်ကျင့်တရားနဲ့ ပြည့်စုံပြီး၊
သာယာချမ်းမြေ့ တဲ့ မိသားစုဘ၀လေး ကိုတည်ဆောက်နိုင်တဲ့အိမ်ထောင်သည်တွေဟာ “စံပြုထိုက်တဲ့ အိမ်ထောင်သည်ဘ၀”ပါ။
ကဲ ညီမလေးတို့ ကရော “သာမာဝတီနဲ့ ခုဇ္ဇုတ္တရာ” အကြောင်းလေးကိုဖတ်ပြီး ဘယ်လိုသံဝေဂနဲ့ သင်ခန်းစာရခဲ့လဲ။ကိုယ့်ဘ၀ကိုရော ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ တည်ဆောက်တော့မယ်လို့ စိတ်ကူးထားလဲ။တစ်နေ့ အိမ်ထောင်သည်ဘ၀ရောက်ခဲ့ရင်ရော.ဘယ်လိုအိမ်ထောင်ရေးမှာနေချင်လဲ။
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားက “မိမိသည်သာ မိမိဘ၀ရဲ့ အလင်းရောင်တဲ့” ဒီစကားလေးက အရမ်းမှတ်သားစရာကောင်းတယ်၊။ကိုယ့်ဘ၀လှပဖို့ ကိုယ်တိုင်က အသိတရားဆိုတဲ့ ဖယောင်းတိုင်လေးကို “ဓမ္မ” ဆိုတဲ့အလင်းလေးနဲ့ ထွန်းညှိပြီးလမ်းပြသင့်ပါတယ်။သူတစ်ပါးအားကိုးလို့ မရဘူး၊
ဘ၀မှာ စည်းစိမ်ဥစ္စာပြည့်စုံတိုင်းစစ်မှန်တဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုအစစ်မဟုတ်ဘူး။စိတ်ချမ်းသာမှုအစစ်က “ဓမ္မ” ဆိုတဲ့ အမှန်တရားကိုသိမြင်ဖို့ ပါဘဲ။
အတိတ်ဘ၀ ကကိုယ်တိုင် ပြုခဲ့ဖူးတဲ့ ကုသိုလ်ကံ၊အကုသိုလ်ကံကြောင့် ဒီဘ၀မှာ ချမ်းသာတဲ့ဘ၀၊ဆင်းရဲတဲ့ဘ၀ ၊ရုပ်ချောတဲ့သူ၊ရုပ်ဆိုးသူ ဘယ်လို လူပဲဖြစ်ဖြစ် အရေးကြီးဆုံးက လက်ရှိကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ဘ၀ကို ရောင့်ရဲကျေနပ်ဖို့ ၊အဆိုးထဲက ကောင်းအောင်နေတတ်ဖို့ ၊စိတ်ထားကောင်းမွန်ဖို့ ၊လူလူချင်းကိုယ်ချင်းစာစိတ်ထားဖို့ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦးအမျက်မပွားပဲမေတ္တာထားဖို့ ၊လက်ရှိကိုယ့်ဘ၀ကိုမှန်ကန်တဲ့
နည်းလမ်းနဲ့ ထိန်းကျောင်းပြုပြင်တတ်ဖို့ ပဲလိုပါတယ်။“လူ့ ဘ၀ဆိုတာတိုတိုလေးပါ” ဆိုပေမယ့် ကြုံတွေ့ ရတဲ့အခက်အခဲတွေ အဆင်မပြေမှုတွေ ဆိုတာ အရမ်းများတယ်။ “ငိုတစ်ခါ ရယ်တစ်လှည့် ”ဆိုပေမယ့် မွေးကတည်းကသေရမယ့်အချိန်အထိ ရယ်ရတာထက် ငိုခဲ့ရတာက
ပိုများနေလိမ့်မယ်။ဘယ်လိုအခက်အခဲပဲကြုံရ ကြုံရ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း၇ှာပြီးမှန်ကန်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့ ဖြေရှင်းပါ။အရာရာကို မျက်စိတစ်ဆုံးကြည့်ပြီး မှဆုံးဖြတ်ပါ။မျက်တောင်တစ်ဖျားစာလေးနဲ့ မဆုံးဖြတ်ပါနဲ့ ။
စိတ်ဆင်း၇ဲစရာတွေများလွန်းလို့ ၊ဘ၀က ဆိုးလွန်းလို့ ဆိုပြီး
စိတ်သက်သာရာရအောင် ထွက်ပေါက်ရှာရင်တောင် ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ကို ကုသိုလ်ရေးတွေမှာ များများအချိန်ပေးလိုက်ပါ။
နဂိုက ကံဆိုးနေရတဲ့အထဲ မဟုတ်တာ မကောင်းတာထပ်လုပ်ရင် ပိုပြီးဆိုးလာပါလိမ့်မယ်။
သာမာဝတီမိဖုရား လို အလှမာန်၊ဓနမာန် မတက်ဘဲ၊ဖြူစင်တဲ့စိတ်လေး ထားတတ်ဖို့ ၊အရာရာကိုစိတ်ရှည်သီးခံနိုင်ဖို့ ၊အနစ်နာခံပြီးခွင့်လွှတ်တတ်တဲ့ စိတ်ထား၇ှိဖို့ ၊ရတနာသုံးပါးနဲ့ ငါးပါးသီလ ကို စောင့်ထိန်းနိုင် မှစစ်မှန်တဲ့ စိတ်ချမ်းသာခြင်း ကိုရရှိပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်တိုင်က ရတနာသုံးပါးနဲ့ ငါးပါးသီလ ကို စောင့်ထိန်းဖို့ လိုသလို ကိုယ့်ချစ်သူဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်အိမ်ထောင် ဘက်ကို လဲ
ရတနာသုံးပါးနဲ့ ငါးပါးသီလ စောင့်ထိန်းနိုင်အောင် လမ်းညွှန်ဆုံးမပေးပါ။အိမ်ထောင်တစ်ခုမှာ အရေးကြီးဆုံးက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အတွက် မြတ်စွာဘုရားချမှတ်ပေးထားတဲ့ အခြေခံကျင့်ဝတ် ဖြစ်တဲ့ ငါးပါးသီလ ကိုသာ လုံအောင်ထိန်းမယ်ဆိုရင်
အရက်သမားမယားဘ၀၊ ထောင်ထွက်မယားဘ၀ ၊မယားကြီး၊မယားငယ်ဘ၀ လဲ ၇ှိလာမှာမဟုတ်တော့ဘူး။အပြင်မှာသာယာမှုရှာတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်တဲ့ယောင်္ကျား၊ မိန်းမ လဲ ၇ှိလာမှာမဟုတ်တော့ဘူး။
တစ်နေ့ ညီမလေးတို့ ကိုယ်တိုင်အိမ်ထောင်ရှင်ဘ၀ မိခင်ဘ၀ရောက်မှာမို့ ...
သားသမီးတွေ လေးစားအထင်ကြီး လောက်တဲ့ အိမ်ရှင်မ ကောင်းတစ်ယောက်၊ ဖြစ်အောင် သားသမီးတွေအတွက် စံပြဖြစ်အောင် နေပါ။
သားသမီးတွေကို ဘာသာရေးအသိတွေနဲ့ လိမ္မာယဉ်ကျေးအောင် လမ်းညွှန်နိုင်တဲ့သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါ။
ဘ၀ကိုလွယ်လွယ် မတွေးပါနဲ့ ။
လင်ကုန် ရှုံးတော့ တစ်သက်
အိမ်ထောင်ရေးကိုလဲ ဖြစ်သလို လွယ်လွယ်နဲ့ မတည်ဆောက်ပါနဲ့ ။
“ပုခက်လွှဲတဲ့မိခင်ရဲ့ လက်ဟာ ကမ္ဘာ ကြီးကိုတောင် လွှမ်းမိုးနိုင်သလို
ပုခက်လွှဲတဲ့မိခင်ရဲ့ လက်ဟာ ကမ္ဘာကြီးကိုလည်းဖျက်ဆီး နိုင်ပါတယ်။
ကမ္ဘာကြီးကို အလှဆင်နိုင်တဲ့ လက်ပိုင်၇ှင်များဖြစ်ကြပါစေ၊”
မေတ္တာရှင်(ရွှေပြည်သာ) ၇ဲ့“ဘ၀နှင့်ရင်းရသော အတွေးအမြင်များ” စာအုပ်ထဲမှာ လူလေးမျိုးရှိပါတယ်။
ကိုယ်ဟာ ဘယ်လိုလူမျိုးလဲ ဆိုတာ ကိုယ့်ဘာသာ ဆန်းစစ်ပါ။ပြီးရင်ပြုပြင်ပါ...
(၁) လူ့ ငရဲသား
(၄)လူ့ ပရမတ္ထ.(လူအစစ်).. ဆိုပြီး..လူလေးမျိုးရှိပါတယ်..
(၁)ငရဲဘုံမှာ ကျရောက်နေတဲ့သူဟာ ဒါန၊သီလ၊ဘာဝနာ ကုသိုလ်တွေလုပ်ချိန်မရပဲ အဆက်မပြတ် နာကျင်ဆင်းရဲခြင်းကိုခံနေရတဲ့သူတွေပါ။ထို့ အတူ..တစ်ချို့ သည် လူ့ ဘ၀ရလာသော်လည်း မကောင်းမှု အကုသိုလ်၊ဒုစရိုက်များ နှင့် လူသတ်မှု၊ခိုးမှု ၊မုဒိမ်းမှု ကျုးလွန်သောကြောင့် ထောင်တန်းကျပြီး ဆင်းရဲဒုက္ခများစွာ ခံကြရသည်။ဒါန၊သီလ၊ဘာဝနာ ကုသိုလ် တစ်ခုမှမလုပ်ခဲ့ပေ။ထိုကဲ့သို့ သော လူသားများကို ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား က လူအစစ် ဟုမသတ်မှတ်...“လူ့ ငရဲသား ” ဟုသတ်မှတ်သည်။
(၂)တိရိစ္ဆာန် သည် အိပ်ခြင်း၊ စားခြင်း၊ ကာမဂုဏ်ခံစားခြင်း သုံးမျိုးကိုသာပြုလုပ်ပြီး ဒါန၊ သီလ၊ ဘာဝနာ ကုသိုလ်များ
တစ်ခုမှမပြုလုပ်သကဲ့သို့ တချို့ လူများသည် စီးပွါးရှာပြီး အိပ်ခြင်း ၊စားခြင်း၊ကာမဂုဏ်ခံစားခြင်း သုံးမျိုးကိုသာပြုလုပ်သည်.။ရ၇ှိလာသည့်စည်းစိမ်များကို အပျော်အပါး ကိစ္စအတွက်သာအကုန်အကျခံပြီး၊ဒါန၊သီလ၊ဘာဝနာ ကုသိုလ်တရားပြုလုပ်ခြင်းမရှိသော သူများကို လူအစစ် ဟု ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား က မသတ်မှတ်..“လူ့ တိရိစ္ဆာန်” ဟုသာသတ်မှတ်သည်၊
(၃) သရဲ၊တစ္ဆေ၊မှင်စာကြပ် ဥစ္စာစောင့်များအားလုံးတို့ ကို ပေတပြိတ္တာ ဟုခေါ်ကြသည်။ပြိတ္တာတို့ သည် အကုသိုလ်ကံ ၀ဋ်ကြွေးကြောင့် ဘယ်သောအခါမှ အစာကို ၀လင်အောင်မစားရပေ။မရပ်မနားတစ်ဘ၀လုံး ၇ှာစားသော်လည်း မသေရုံသာစားရသည်။
လူများစွန့့်ပစ်ထားသော စားကြွင်း၊စားကျန်၊ တံတွေး၊နှပ်၊သလိပ်များ တွေ့ သမျှကို ရှာဖွေစားသောက်ကြရပါသည်။အစာကိုသာ တစ်ဘ၀လုံး ကုန်းရုန်းရှာဖွေပြီး သေသွားကြသည်။ ဒါန၊သီလ၊ဘာဝနာ ၊ကုသိုလ် တစ်ခုမှမပြုနိုင်ခဲ့ပါ။
တစ်ချို့ မှာ လူလာဖြစ်သော်လည်း ဆင်း၇ဲနွမ်းပါးလွန်းသဖြင့် တစ်ဘ၀လုံးဝမ်းရေးတစ်ခုအတွက်သာ ရှာဖွေစားသောက်ရင်း
တစ်ဘ၀ဆုံးသွား၏ ။၊ဒါန၊သီလ၊ဘာဝနာ။ကုသိုလ်တရားတစ်ခုမှမလုပ်နိုင်၊ထိုလူသားမျိုးကို လူ အစစ်ဟု ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားက မသတ်မှတ်
“လူ့ ပြိတ္တာ” ဟုသတ်မှတ်သည်။
(၄)တစ်ချို့ လူမှာ စီးပွါးရေးကိုလည်း လူတန်းစေ့အောင်သမာအာဇီဝနည်းနဲ့ ရှာနိုင်ပြီး ၊မသောက်မစား အကုသိုလ်ရှောင်ပြီး ။၊ရတနာသုံးပါးနဲ့ ငါးပါးသီလ ကိုစောင့်ထိန်းနိုင်၏၊ဒါန၊သီလ၊ဘာဝနာ ကုသိုလ်တ၇ားကိုလည်း စွမ်းနိုင်သမျှပြု
ပြီး မိမိကိုယ်ကို တန်ဖိုး၇ှိအောင် သိက္ခာရှိအောင် နေနိုင်သော သူများကိုသာ ဗုဒ္ဓက “လူ့ ပရမတ္ထ” လူအစစ် ဟုသတ်မှတ်သည်။
နှစ်တန်သိရမည် အိပ်၊စား၊ ကာမ၊
သိရုံမျှ မှတ်ကြ လူမပီ
အချိန်ပေးပြီးအားပေးဖတ်ရှု ကြတဲ့ ညီမလေးများကို ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်။
ညီမလေးတို့ လည်း ကိုယ့်ဘာသာကို ချစ်ရင် ဘာသာတန်ဖိုးသိအောင်ကြိုးစားပါ။ဘာသာတရားကိုရိုသေပါ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ချစ်ရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် တန်ဖိုးရှိအောင်နေပါ။
Written By ရွာသူလေးချမ်းချမ်း ရင်တွင်းဖြစ် at 12:49 AM